9:14 AM ဟိုဟို ဒီဒီ No comments
မှတ်ချက် - ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ :D
Bird named "Kos"
Flowers named "God"
Wild rose fruits for jelly and tea
Bridge for us
Eat, suck and bite
underneath the strawberry tree
Life with nature and communication
Walnut with web
that's all (not much)
Natural knife cuts
My wound in my life
Life has no hopes and dreams but wound
Plain (oak tree)
Young but has experiences
11:54 AM သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ2comments
10:43 AM နင်ဟာ ... ငါ့ရဲ့စိမ်းလန်းတဲ့ကမ္ဘာ, ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို 11 comments
“အစစ်ပေါ့ သဇင်ရာ၊ ဒီမှာကြည့် ငါ အခုပဲ မြူနီစပယ်ရုံးက ပြန်လာတာ၊ ဒီမှာစာရွက်စာတမ်းတွေ”
ညီညီက ပြံးရွှင်ပေ့ါပါးနေတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ စာရွက်တွေတစ်ထပ်ကြီးပဲ သဇင့်လက်ထဲကို ထည့်ပေးပါတယ်။ သဇင် စာရွက်တွေကို ယူကြည့်ရင်း စဉ်းစားနေမိတယ်၊ ဒီရက်ပိုင်း သဇင် ကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့ မအားလပ်တာနဲ့ ဒီလူငယ်လေး ညီညီနဲ့ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူကလည်း ဒီရက်ပိုင်းမှာ အချိန်မှန် ဖုန်းဆက်နေခဲ့ပေမဲ့ သူ့ ပရောဂျက်ဆိုတာ လေသံတောင်မဟခဲ့ပါဘူး။ ညီညီက အဲဒီလိုပါပဲ၊
မသေချာသေးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ဘယ်တော့မှမပြောဘူး၊ သူ့ဘာသာ ကျိတ်ပြီး လုပ်နေတတ်တယ်။ သေချာပြီဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ အမာခံ သူငယ်ချင်း သဇင့်ကိုပဲ အရင်ဆုံး ပြောပြတတ်တာလည်း သူ့ရဲ့ အကျင့်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ၊ ပြီးရင်တော့ အကူအညီ တောင်းတတ်တာပဲလေ။
ညီညီ့ရဲ့စာရွက်တွေထဲမှာ မြက်ရိတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ တံဆိပ်တုံးတွေလက်မှတ်တွေနဲ့ စာရွက်ကိုလည်းတွေ့ရဲ့၊ ပတ္တမြားစင်တာဘေးက ခေတ်ပြိုင်အနုပညာပြတိုက်ဒါရိုက်တာရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ စာရွက်တွေလည်းတွေ့ပြန်တယ်။
“ညီညီ နင့်ပရောဂျက်က ဘာလဲ၊ ပြတိုက်ရှေ့က မြက်ခင်းတွေရယ် ကြေးနီတံတားဘေးက မြက်ခင်းတွေမှာရော ဘာလုပ်မှာလဲ”
“ကြေးနီတံတားဘေးမှာတော့ မြက်တွေနဲ့ စာလုံးအကြီးကြီးတွေ ဖော်မယ်လေ၊ ပြတိုက်ရှေ့က မြက်ခင်းတွေကွာ အကျယ်ကြီးပဲ၊ အဲဒီမှာ ကြယ်ပုံတွေဖော်မယ်၊ ငါ ဗော်လန်တီယာတွေ ခေါ်ထားတယ်၊ ဂူးဂဲလ်မက်ပ်(google map)ကနေ တိုင်းကြည့်ထားပြီးပြီ၊ ကြယ်တွေ ၃၇ ခု ရှိမယ်၊ ၉ပေကနေ ၁၂ ပေလောက်ထိကြီးမယ်ဟာ၊ တံတားဘေးက စာလုံးတွေကတော့ “မင်္ဂလာပါ” “ချစ်တယ်” “ချမ်းမြေ့ပါစေ” “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” အဲဒီလိုစာလုံးတွေပေါ့၊ ငါ့ ရဲ့ art installation ကို ပန်းချီကျောင်းကလည်း support လုပ်မယ်၊ ပြတိုက်ကလည်း လက်ခံလိုက်ပြီ၊ ငါနဲ့ ဗော်လန်တီယာတွေ က စာလုံးတွေ၊ ကြယ်ပုံတွေ မြက်မှာ အရာပေးထားရုံပဲ၊ မြက်ရိတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ကနေ သူ့လူတွေနဲ့ ကားတွေနဲ့ လာရိတ်ကြလိမ့်မယ်”
“တော်ပါဟယ်၊ ဗော်လန်တီယာဘယ်နှစ်ယောက်လာကြမှာလဲ၊ စပွန်စာမရှိတဲ့၊ ကျောထောက်နောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရှိမနေတဲ့ နင့်ပရောဂျက်ကို ဗော်လန်တီယာတွေက စိတ်မ၀င်စားပါဘူး”
“သူတို့ မလာလည်း ငါ ... တစ်ယောက်တည်းဆိုလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ငါကတော့ လုပ်မှာပဲ”
ညီညီ့လေသံ နည်းနည်းလေးတိုးသွားပေမဲ့ သူက မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်ပုံစံ ဟန်ပန်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွနေပါတယ်။
“နင့် မြက်စာလုံးဖေါ်တဲ့အင်စတော်လေးရှင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကရော”
“အာ .. နင်ကလည်း မေးနေပုံက ကြောက်စရာလန့်စရာ”
သဇင်က အမှန်တော့ ညီညီ့ စချင်နောက်ချင်တာ၊ ညီညီရှင်းပြတဲ့ ပုံစံလေးကို မြင်ချင်လို့ပါ။
“ဒီလို အင်စတော်လေးရှင်းမျိုးက public မှာ လုပ်ရတာကွာ၊ တီထွင်ဖန်တီးရတဲ့ art တစ်ခုပဲ၊ ပရိသတ်တွေက art ဖြစ်စဉ်ကို အစကနေအဆုံး စောင့်ကြည့်နေလို့ရတယ်၊ စကားဝင်ပြောလို့ရတယ်၊ ဝေဖန်လို့ရတယ်၊ စိတ်ဝင်စားလာရင် ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါလို့လည်းရသေးတယ်၊ artist တွေရယ် ပရိသတ်တွေရယ်၊ artwork ရယ်က အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်နေကြတာကွာ၊ ဒီလို artwork တစ်ခုပြီးသွားရင် ရလာတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုခွန်အားတွေကို အကုန်လုံးက ရယူနိုင်တယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ တုံ့ပြန်တဲ့အသံကို ချက်ချင်းရတာ၊ artist တွေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုပြီးရလာတယ်၊ ပြီးတော့ ငါတို့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေက သဘာဝပစ္စည်း၊ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေနဲ့ ပုံဖော်ကြတာ၊ အရင်ပရောဂျက်တွေတုန်းက ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ ငါတို့ အပင်ပမ်းခံပြီး သွားကောက်ကြတယ်၊ လူမြင်ကွင်းမှာ စီတန်းပြီးချပြထားလိုက်တယ်။
ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကို မြစ်လို ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်စီပြီး ချပြထားတယ်၊ ပလပ်စတစ်ဗူးမှာ စာတမ်းလေးတွေ ချိတ်ထားလိုက်တယ်၊ “ငါတော့ ရင်ပြည့်နေပြီ ... ပုံ/ ဧရာဝတီ” “ကျွန်တော်တို့အတွက် နေရာမရှိဘူး .. ပုံ/ပလပ်စတစ်” အဲလိုမျိုးပေါ့၊ စာတမ်းလေးတွေကို လူတွေက ယူပြီးကြည့်တယ်၊ သဘောကျရင် ဖြုတ်ယူသွားလို့ရတယ်၊ အဲဒီ artwork က လူသားအရည်အသွေးမြှင့်တင်တဲ့၊ အသိပေးတဲ့ အင်စတော်လေးရှုင်းမျိုးပေါ့ဟာ၊ ငါတို့ အဲဒီလို အင်စတော်လေးရှင်းလုပ်ပြီးတဲ့နောက် တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်း ပလပ်စတစ်ဗူးတွေရှင်းဖို့ အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ လှုပ်ရှားလာကြတယ်၊ အဲဒါ ငါတို့ art installation ရဲ့ အမြတ်ပေါ့၊ အခု မြက်တွေကို စာလုံးဖော်မှာကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့ရယ်၊ ရုံးဆင်း ရုံးတက် ဒီမြစ်ကြီးကို ဖြတ်သွားကြတဲ့ သူတွေကို မျက်စိပသာဒဖြစ်အောင် ဖြေဖျော်တဲ့ သဘောမျိုးပဲ၊ ပြီးတော့ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာပြတိုက်ကြီး၊ နင်သိတယ်မဟုတ်လား၊ သူ့ ရှေ့က မြက်ခင်းပတ်လည်ရယ် ပြတိုက်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာရောပဲ လက်ရာမြောက်တဲ့ ရှေးခေတ်ပန်းပုရုပ်ကြီးတွေ ရှိနေတယ်၊ အဲဒီ ပြတိုက်ကြီးကကွာ အခုဆို ပိတ်ထားရတယ်၊ ဈေးဝယ်စင်တာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုသာ ဖွင့်လာကြတယ်၊ ဒီပြတိုက်ကြီးကတော့ ပိတ်ထားရဆဲပဲ၊
အဲဒီရှေ့က ပေါက်ပြားကြီးတွေပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းပုရုပ်ဆို သမိုင်းကြောင်းတွေ အများကြီးပဲ ရှိတယ်၊ ဘေးက အလုပ်သမားပုံပန်းပုရောပဲ၊ သူ့ရဲ့ လက်မောင်းတစ်ဘက်က လျှောကျပြီး ပြားချပ်နေတာပဲ၊ ဦးခေါင်းကြီးက ဦးနှောက်နေရာမှာ ချိုင့်ဝင်နေတယ်၊ နင် သိလား၊ ပန်းပုဆရာက နာမည်ကြီး၊ သူဘာလို့ နာမည်ကြီးတာလည်း၊ ပန်းပုရုပ်ကို အလှပြရုံထုထားတာမဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်သမားတွေ လက်မောင်းတွေလျှောကျ ပိန်လှီစုတ်ပြတ်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်၊ ဦးနှောက်တွေက ထုတ်ယူစားသုံးခံထားရတယ်၊ သူ က အဲဒါတွေကို message ပေးချင်ခဲ့တာ၊ အဲဒါကြောင့် အဲဒီပန်းပုဆရာနာမည်ကြီးတာ၊ ဒါပေမဲ့
အခုတော့ ဘယ်သူမှ ပြတိုက်ကြီးနဲ့ ပန်းပုရုပ်တွေကို ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူး၊ အဲဒီပြတိုက်ကြီး ရှေ့မှာ ငါ .. ကြယ်ပုံတွေ အကြီးကြီး ပုံဖော်ပြီး ရိတ်မယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ အဲဒီနား မိုးမျှော်ပတ္တမြားမျှော်စင်အပေါ်ဆုံးထပ်က စားသောက်ဆိုင်ကနေ ကြည့်ရင် ပြတိုက်ကြီးရဲ့ရှေ့၊ အမြဲလိုလို အစိမ်းရောင်တွေပဲ ပြည့်နေတဲ့ မြက်ပင်တွေထဲမှာ ကြယ်တွေ ကို တွေ့တဲ့သူတွေရှိလာကြမယ်၊ ပြတိုက်ရှေ့မှာ ဆိုတာနဲ့တင် လူတွေ .. သူတို့ မေ့လျော့နေတဲ့ ပြတိုက်ကြီးကို သတိပြုမိလာမယ်၊ ပြီးတော့ကွာ အပင်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးလာမယ်၊ အဲဒါတွေက ငါပေးချင်တဲ့ message တွေပေါ့ဟာ၊ အမလေး ပြောရတာ မောလိုက်တာ၊ ငါ မြက်ရိတ်ပြီး စာလုံးမဖော်ရသေးဘူး၊ သဇင်ရာ .. နင့်ကို ရှင်းပြရတာနဲ့တင် မောပြီး သေလို့ရနေပြီ”
“မသေပါနဲ့ဦး ညီညီရယ် မြက်တွေနဲ့ စာလုံးတွေ ဖော်သွားပါဦး”
အဲဒီလို သဇင်က စနောက်လိုက်တော့ ညီညီက တဟားဟား အော်ရယ်ပါတော့တယ်။
ဒီလူငယ်လေးကို သဇင် အထူးတလည် အံ့သြမနေတော့ပါဘူး။ သူက ပလပ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်နေတတ်တဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရတိုင်း စိတ်တိုတတ်တယ်။ ပလပ်စတစ်အိတ်တွေ လေထဲမှာ ၀ဲပျံပြီး သစ်ပင်ပေါ်မှာ ချိတ်နေတာ မြင်ရတိုင်း သူ့မျက်ခုံးတွေ တွန့်ချိုးပြီး ရှုသိုးသိုးကြည့်တတ်တယ်။ မြစ်ကမ်းဘေး သွားထိုင်ဖြစ်ကြတဲ့အခါ မြစ်ကမ်းဘေးက စုပုံနေတတ်တဲ့ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ တွေ့ရတိုင်းလည်း သူ အဲဒီပလပ်စတစ်ဗူးတွေကို မျက်မုန်းကျိုးတယ်။ သဇင်နဲ့ နှစ်ယောက်တည်းအတူရှိနေကြတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ညီညီ့ဆီက နုနုဖတ်ဖတ် ချစ်စကားလေးများ ကြားရမလားလို့ သဇင် အချိန်တွေတော်တော်များများမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ အဲဒီလူငယ်လေးကတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာ၊ သူ့ရဲ့စိမ်းလန်းလှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းပဲ ပြောနေခဲ့တာပါပဲ။
“သဇင် .. သိလား၊ ငါတို့တွေ အလုပ်က အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ကစားကွင်းတွေသွား၊ ကလပ်သွား အပျော်အပါးသွားနေကြမယ့်အစား ဒီအမှိုက်တွေကို စုပေါင်းပြီး ရှင်းလိုက်ရင် သိပ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာ လမ်းတွေရှင်းသွားမှာပဲ၊ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တက်စွပ်နေတတ်တဲ့ သစ်ကိုင်းတွေလည်း သူ့တို့ကိုယ်ပိုင်အရွက်တွေနဲ့ပဲ လှသွားကြမှာ၊ မြစ်ကမ်းဘေးမှာလည်း ရှင်းတဲ့နေရာတော့ ရှင်းထားပါရဲ့၊ သူတို့ ထိုင်ကြမယ့် နေရာကွက်ကွက်လေးပဲ ရှင်းလင်းထားကြတယ်၊ သူတို့အတွက် နေရာလေးကတော့ လှနေတာပေါ့၊ မြစ်ကြီးရဲ့ တခြားနေရာ၊ တခြားမြစ်ကမ်းပါးတွေမှာက ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ စုပြုံနေတာပဲ၊ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေနဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တော့မယ်။ ငါတို့ ဒီနေ့ကမှ စပြီးမရှင်းရင် သိပ်မကြာဘူး၊ မြစ်ကြီးက ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ ဆို့ပိတ်ပြီး ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်တော့မှာ”
ညီညီအဲဒီလို ပြောလာတုန်းက သဇင်က စနောက်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
“ခစ်ခစ် ... မြစ်ကပဲ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ်ရတယ်လို့”
သဇင့်က စနောက်တော့ ညီညီ စိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။ အမှန်က သဇင်လည်း သိတာပေါ့၊ သဇင်တို့ မြစ်ကမ်းဘေးသွားထိုင်ကြရင် ခုံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားကြတဲ့ ပန်းခြံရှိတဲ့ ဘက်မှာ မထိုင်ပဲ၊ တမင် မြေသားကြီးပဲ ရှိနေတဲ့ မြစ်ကမ်းပါးဘက်အထိ ရောက်အောင် သွားထိုင်တတ်ကြတာပဲ။ လူတွေက ကိုယ်ထိုင်တဲ့နေရာလေးမှာ ရှင်းလင်းနေရင် ပြီးရော သဘောထားလိုက်ကြပြီး မြစ်ထဲကို အလွယ်တကူပဲ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်တွေ ပစ်ချလိုက်ကြတယ်။ စီးနေတဲ့ မြစ်ကြီးကတော့ သူ့ရဲ့ ရေစီးပေါ်ကို ခုန်ဆင်းလာတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယအားလုံးကို သယ်ယူသွားပေးပါတယ်။ အမှိုက်လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ လူရဲ့ရှေ့မှာ ရှင်းလင်းသွားပေမဲ့ မြစ်ကြီးက ဘာတတ်နိုင်မှာတဲ့လဲ၊ သူ မသယ်နိုင်တော့တဲ့ တစ်နေရာမှာ အဲဒီ အမှိုက်သရိုက်တွေကို စုပုံထားလိုက်တော့တာပဲပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ မြစ်ကြီးရဲ့ နေရာတစ်နေရာ၊ တစ်နေရာမက နေရာတွေမှာ ပလပ်စတစ်ကျွန်းဆိုတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။
Great War Island က ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ
အဲဒီလို ပလပ်စတစ်ကျွန်းလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြစ်ဘေးနားက ကျွန်းလေးဆီ ဗော်လန်တီယာတွေကို ဦးဆောင်ပြီး ညီညီတို့ သွားကောက်ကြတုန်းကလည်း သဇင် နေ့တိုင်း ညီညီ့ကို ကူညီခဲ့သေးတယ်။ ပထမနေ့မှာ ဗော်လန်တီယာ၁၅ ယောက်လောက် လာခဲ့ပေမဲ့ နောက်နေ့တွေ သူတို့ ပင်ပမ်းသွားကြရော အကုန်လုံး မလာနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ သဇင်တို့ သုံးရက်လောက် တစ်နေကုန် ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကောက်ခဲ့ကြတာ နှစ်သောင်းကျော်လောက် ရခဲ့ကြတယ်။ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကို မြူနီစပါယ် အမှိုက်သိမ်းကုမ္ပဏီရဲ့ ဂိုထောင်မှာ သိမ်းထားပေးပြီး နောက်နေ့ မြို့ရဲ့ နေရာ လေးနေရာလောက်မှာ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေနဲ့ အင်စတော်လေးရှင်းတဲ့၊ ညီညီပြောတဲ့စကားအတိုင်းဆို Ecoart installation ပေါ့။ အဲဒီ အင်စတော်လေးရှင်းလုပ်ပါတယ်။ တံတားဘောင်ပေါ်မှာ ညစ်ပေနေတဲ့ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကို တစ်ပေခွဲခန့်စီခွဲထားပြီး စီထားတယ်၊ ခိုင်ခံ့အောင် ပလစ်စတစ်ဗူးကို ဖောက်ပြီး ဘောင်မှာ ကြိုးနဲ့တွဲရတယ်။ ညီညီ့ရဲ့ အဲဒီလို art installation လုပ်ဖို့အတွက် မြူနီစပါယ်ဆီက ခွင့်ပြုချက်ရဖို့ အချိန်တွေအများကြီး ပေးရပါသေးတယ်။ သူ့အလုပ်အားတဲ့အချိန် ရုံးတွေ ညီညီ ခဏခဏသွားခဲ့ရတယ်။ ဒါလည်း ညီညီကတော့ ပင်ပမ်းတယ်တစ်ချက်မငြီးငြူပါဘူး။
ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်က ဖြတ်သွားတဲ့ လူတွေက ညီညီ့ရဲ့ စီတန်းနေတဲ့ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကို မြင်တော့ အဆန်းတကြယ်ဖြစ်ကြတယ်။ ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်ဗူးတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ပြောချင်တဲ့စကားတွေ ပေးချင်တဲ့အသိတရားတွေ လက်ခံယူနိုင်ကြလားတော့ မသိပါဘူး၊ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ တံတားပေါ်က ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ မရှိကြတော့ဘူး။ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြပြီ။ မသင့်တော်တဲ့ လူမြင်ကွင်းနေရာမှာ ရောက်နေကြတဲ့ ညစ်ညစ်ထေးထေး ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကို လူတွေက နှာခေါင်းရှုံ့ကြတယ်။ သူတို့ မမြင်လိုကြဘူး။ ဒါဆို ပလပ်စတစ်ကျွန်းတွေနဲ့ ပြည့်ကယ်နေတဲ့ မြစ်ကြီးအတွက်ကရော။ အဲဒီနေရာက ပလပ်စတစ်ဗူးတွေကိုရော ဖျက်ဆီးလိုစိတ် မရှိကြဘူးတဲ့လား။ လူတိုင်းကို အဲဒီမေးခွန်းတွေ မမေးနိုင်တဲ့အခါတိုင်း သူ့ရဲ့ဘေးမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ သဇင့်ကိုပဲ ညီညီက မေးနေတတ်ပါတယ်။ သဇင်ကတော့ ဖြေတာပေါ့။
“သဇင်လား၊ သဇင်ဆို နေရာတိုင်းက ပလပ်စတစ်ဗူးတွေ ဖျက်ဆီးမှာပေါ့၊ ရှင်းလင်းလိုစိတ်ရှိတာပေါ့” လို့။
သဇင် ဖြေတိုင်း လူငယ်လေးညီညီရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေ တဖြတ်ဖြတ်လက်နေရင်း သဇင့်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာ ကြည့်တတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ရှင်းသန့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းလက်လက်လေးတွေကို သဇင် သိပ်ချစ်ရတာပေါ့။
သဇင် ညီညီ့စာရွက်တွေ ကြည့်နေရင်း အတွေးတွေက နောက်ပြန်လို့နေတယ်။ ညီညီ ဘာပြောမှန်း သဇင်မကြားလိုက်ပါဘူး။ ညီညီက သဇင့်ခေါင်းကို သာသာလေး ပုတ်လိုက်ပြီး ထပ်မေးတယ်။
“ဟင် .... သဇင် ... နက်ဖြန် ငါ လာခေါ်မယ်နော်၊ နင်လိုက်မယ် မဟုတ်လား။ မြက်တွေ စာလုံးဖော်လို့ရတဲ့ အရှည်ရောက်နေပြီလား သွားကြည့်ရမယ်၊ နင်လိုက်မယ်ဆို အပြန် အဲဒီနားက boat restaurant မှာ အာလူးကြော်ကျွေးမယ်လေ”
“ဟာ နင်ကလည်း စားသောက်ဆိုင်သွားပြီး အာလူးကြော်ကျွေးမယ်ဆိုတာကပါသေးတယ်၊ နာမည်တောင်တပ်လိုက်သေးတယ်၊ အဲဒီမှာကျွေးမယ်ဆို တော်ပြီပေါ့”
“ဟား ဟား မဟုတ်ပါဘူး သဇင်ရာ၊ နင်က အာလူးကြော် သိပ်ကြိုက်တာမို့ နာမည်တပ်တာပါ၊ နင် စားချင်တာကျွေးမှာပေါ့ဟ”
“အင်း၊ ငါ အိမ်ကပဲ စောင့်နေမယ်၊ လာခေါ်”
ညီညီက စာရွက်တွေတထပ်ကြီးဖိုင်ထဲ သေချာပြန်ထည့်ပြီး သဇင့်ကို တစ်ချက်စိုက်ကြည့်တယ်။ ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ့်ကာ နှုတ်ဆက်တယ်။ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဂျင်းအပြာရင့်ရောင်ဘောင်းဘီနဲ့ ညီညီ့ပုံစံလေးကို သဇင် သဘောကျစွာ ငေးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ လမ်းခပ်သွက်သွက်လျှောက်တတ်တဲ့ ညီညီကတော့ သဇင့်မြင်ကွင်းထဲက မြန်မြန်လေးပဲ ပျောက်သွားတယ်။
မနက်ခင်းစောစော နေရောင်မထွက်သေးတဲ့ အချိန် အစောကြီးပဲ ညီညီရောက်လာပါတယ်။ ညီညီက ညကတည်း သူအစောကြီးပဲ လာခေါ်မယ်လို့ ဖုန်းဆက်ထားတော့ သဇင် စောစောစီးစီးအလှပြင်ထားရပါသေးတယ်။
“ဟာ မဖြစ်ဘူး .. သဇင်၊ အင်္ကျီလက်ရှည်၊ အနွေးထည်ထပ်ဝတ်ရမယ်၊ ဦးထုပ်လည်းဆောင်းဦး၊ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ လေသိပ်တိုက်တယ်ဟ”
သဇင့်ကိုတွေ့တွေ့ချင်း ညီညီက ပြောတော့တယ်။
“အဲဒါကြောင့်ပေါ့ နင့်ကို ငါစိတ်ညစ်တာ၊ ငါ့မှာ ဘယ်တော့မှ လှလှပပ ၀တ်ရတယ်မရှိဘူး၊ အေးတယ် အေးတယ်နဲ့ နင်နဲ့ သွားရင် အသက်ကို ၀၀ မရှုရဘူး”
“လှဖို့ မလိုဘူး၊ နင်က လှပြီးသားပဲ၊ မြစ်ကမ်းပါးမှာ သိပ်အေးတယ်ဟ၊ ငါ ရောက်ပြီးခဲ့ပြီ၊ အခု နင့်ကို လာခေါ်တာ၊ ငါ ဒီနေ့ အလုပ်စရင် စတော့မှာမို့ အနွေးထည်ယူပါဟာ၊ ငါ ပြောတာနားထောင်ပါ”
အဲဒီလူငယ်လေးဟာ သဇင်ကြားချင်နေတဲ့ စကားလေးတွေတော့ မဆိုတတ်ဘူး။ သဇင့်ကို ဂရုစိုက်တာကျတော့လည်း ပြာပြာသလဲ ရှိလွန်းလှတယ်။ ကဲ .. သဇင် ဘယ်လို နားလည်ရပါ့မလဲ၊ သဇင်တို့ ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့ နှစ်တွေလည်း မနည်းတော့ဘူး၊ သဇင့်ကျောင်းစာတွေ၊ သဇင့် အလုပ်တွေအတွက် အမြဲလိုလို အကူအညီပေးတတ်သလို၊ သဇင်ကလည်း ညီညီ့အတွက်ဆို ကူညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတတ်ခဲ့တာတွေ၊ ခိုင်မာနေတဲ့ သံယောဇဉ်တွေက ကိုယ်စီရှိနေကြပြီးသားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ညီညီက ခုထိ သဇင့်ကို ဖွင့်မပြောသေးပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်ခါ သဇင် စိတ်ဆိုးချင်လှပေမဲ့ ညီညီ့ရဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင်မျက်လုံးလေးတွေမြင်ရပြန်တော့ ဒီလူငယ်လေးညီညီက သဇင့်ရဲ့ ညီညီပဲလို့ စိတ်ချထားမိပြန်ရော။
“သဇင်ရဲ့ သွားပါဟ၊ ဦးထုပ်၊ အနွေးထည် မြန်မြန်ယူချည်ပါဟ၊ နင်မကိုင်ချင် ငါ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲ အကုန်ထည့်၊ ငါပဲ သယ်ပေးမယ်၊ နင် အိမ်ပေါ်ကို တက်ယူရုံပဲ၊ အန်တီတို့ကိုလည်း ပြောပြလိုက်ပါဦး၊ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦး၊ ငါ အိမ်ပေါ်မတက်တော့ဘူး”
တခဏလေး အတွေးလွန်သွားတဲ့ သဇင် ကိုယ့်ဘာသာ သဘောကျပြီး ခစ်ကနဲ ရယ်ချလိုက်မိပါတယ်။ အိမ်ပေါ်ကိုပြေးတက်ခဲ့တော့တယ်။
သဇင်လည်း ညီညီ့ကို အရွဲ့တိုက်ပြီး အင်္ကျီအထူကြီးတွေ ယူလာခဲ့ပါတယ်၊ ညီညီ လက်ထဲ အကုန်ပေးလိုက်တယ်။
“ရော့ အင့် အဲဒါတွေ အကုန် နင့် ကျောပိုးအိတ်ထဲ ရအောင်ထည့်ပေတော့”
“သိပ်ရတာပေါ့ သဇင်ရာ၊ နင် အအေးမမိဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပဲ”
ညီညီကတော့ တဟားဟားရယ်မောရင်း ကျောပိုးအိတ်ကို ဖွင့်ကာ အင်္ကျီတွေထည့်ပါတယ်။
သဇင်တို့ ကြေးနီတံတားနားကိုရောက်တော့ ကားရပ်တဲ့ နေရာမှာ ကားကိုရပ်လိုက်တယ်။ မြစ်ကြီးကို မြင်တာနဲ့ မြစ်ကမ်းပါးဆီက လျှောက်လမ်းတွေနေရာကို သဇင် အပြေးသွားတော့တာပေါ့။ ဒီအချိန်က ပန်းတွေဖူးပွင့်တဲ့အချိန်လေ၊ မြစ်ကမ်းပါး လျှောက်လမ်းတွေ ပတ်လည်မှာ ပန်းရောင်စုံတွေစိတ်ပျိုးထားကြပါပြီ။ မနက်ခင်းစောစော မြစ်ကမ်းပါးဘေးမှာ အပြေးကျင့်နေတဲ့သူတွေလည်း ဟိုမှာ သည်မှာ တွေ့နေရပြီ၊
နေခြည်ဆောင်းလာတဲ့ ဦးထုပ်ဖြူလေးက ဝေါကနဲ တိုက်လိုက်တဲ့ လေနဲ့ အတူ အနောက်ဘက် ဝေးဝေး လွင့်သွားပါတယ်။
ညီညီက သဇင့် ဦးထုပ်လေးကို ကောက်ယူလာပြီး သဇင့်နားရောက်လာတယ်။ သဇင့်ခေါင်းပေါ် ဆောင်းပေးပြီး ဦးထုပ်လျှာလေးကို ကိုင်ကာ ဖိချလိုက်ပါတယ်။
“သဇင် ကားထဲ ထိုင်နေပါဟာ အခု နေမထွက်သေးဘူး၊ လေတိုက်တာ သိပ်ပြင်းတယ်၊ အေးတယ်၊ နေထွက်လာရင် နေရောင်နဲ့ ဆိုရင် အအေးပေါ့သွားမှာ”
“နင်ကလည်း ငါက ကားထဲ ထိုင်ပြီး ဘာလုပ်နေရမှာလဲ၊ နင်ကရော ဘာလုပ်မှာလဲ”
“ဒီနေရာမှာ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”လို့ စာလုံးဖော်မယ်၊ ဒီနေရာမှာ “မင်္ဂလာပါ”၊ ဒီနေရာမှာ “ချစ်တယ်”၊ ဒီနေရာမှာ ”ချမ်းမြေ့ပါစေ” စာလုံးဟာ။
ညီညီက ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်က မြက်ခင်းတွေပုံကို လက်နဲ့ တစ်ခုစီထောက်ပြတယ်။ ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့ စာရွက်က မြက်ခင်းတွေပေါ်မှာ သူပြောတဲ့ စာလုံးတွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ပုံဖော်ထားပြီးသား၊ သူ အတိုင်းအထွာတွေကို တွက်ချက်ထားပြီးပြီတဲ့။
“အခု ငါ ကြိုးနဲ့ တိုင်းပြီး နေရာလေးတွေမှတ်မယ်၊ နင် ကားထဲမှာပဲနေလိုက်နော်”
ညီညီက ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ...
ကြိုးခွေလေး တစ်ခွေ၊ အရွယ်တူဖြတ်ထားတဲ့ သစ်ကိုင်းခြောက် တစ်စည်းကို ဆွဲယူကာ မြက်ခင်းတွေရှိတဲ့နေရာဆီ ထွက်သွားပါတယ်။
ညီညီက မြက်ခင်းပေါ်မှာ လေးဘက်လေးတန် သစ်ကိုင်းခြောက်လေးတွေကို ထိုးစိုက်တယ်။ သစ်ကိုင်းခြောက်လေးတွေရဲ့ထိပ်မှာ မြင်သာအောင် ထုံးအဖြူရောင်တွေသုတ်ထားတယ်။ တစ်ဘက်ကိုလည်း မြေကြီးထဲ စိုက်ရလွယ်အောင် ဓါးနဲ့ ဖြတ်ကာ ချွန်ထားလိုက်သေးတယ်။ ညီညီကတော့ တကယ်ပါပဲ။ အဲဒီ သစ်ကိုင်းခြောက်လေးတွေအများကြီးကို ဘယ်နေ့ကတည်းက ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါလိမ့်။ သဇင့်က ညီညီ့ကို ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပါတယ်။ အိုး .. သဇင် ခုမှတွေ့တယ်။ ကားပေါ်က ပစ္စည်းတင်တဲ့တန်းပေါ်မှာ မြက်ရိတ်တဲ့စက်လေး၊ ဒါကိုလည်း ညီညီ တစ်ခါတည်းယူလာတာကိုး၊ ဒါဆို ဒီနေ့ပဲ ညီညီ မြက်တွေစာလုံးဖော်တော့မယ်ပေါ့၊ သစ်ကိုင်းလေးတွေမှာ ကြိုးတန်း လိုက်တန်းပြီးတဲ့ အခါ သဇင့်နားကို ရောက်လာပါတယ်။
“သဇင် နင်မအေးဘူးလား၊ ငါ အခု မြက်တွေ စာလုံးဖော်တော့မယ်၊ ငါ့ကို ကူဦးနော်၊ ငါ မြက်တွေစရိတ်တဲ့အချိန် နင်က တံတားပေါ်ကနေ ဗီဒီယိုရိုက်ထားပေးလေ၊ စာလုံးတစ်လုံးစီ ပေါ်လာတာကို ငါ ပြန်ကြည့်ချင်လို့ဟ၊ စာလုံး အားလုံး ရိတ်ပြီးသွားရင် ရပ်လိုက်၊ ငါ တံတားပေါ်ကိုလာခဲ့မယ်၊ နင့်အနွေးထည်လည်း ယူသွား၊ ငါ့ ဂျာကင်အင်္ကျီကြီးက ကြီးတယ် ၀တ်ထားလိုက်၊ ငါက အခု အလုပ်လုပ်တော့မှာဆိုတော့ မလိုဘူး၊ တံတားပေါ်မှာက လေတ၀ှီးဝှီးနဲ့ ဟ”
“ဟင် ငါတစ်ယောက်တည်း တံတားပေါ်မှာ၊ တံတားပေါ်ကနေ အောက်ကို ကြည့်နေရမှာ ငါ ကြောက်တယ်ဟဲ့၊ ငါက အမြင့်ကြောက်တတ်တာ နင်သိသားပဲ၊ အခုက ငါက နင့်ကိုတချိန်လုံး ကြည့်နေရဦးမှာ၊ ဘယ်မှာလဲ နင့် ဗော်လန်တီယာတွေ”
သဇင် ပြောမယ့်သာပြောတာ လက်က ဗီဒီယိုကင်မရာကို စမ်းနေပြီ။ ညီညီ့ကို ကူညီဖို့ သဇင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
“သူရ လာလိမ့်မယ်၊ နင်သိတယ်မဟုတ်လား၊ ငါ့နဲ့ အပြေးကျင့်နေကြကွာ၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဖုန်းဆက်တာ ဗော်လန်တီယာ ကောင်မလေး မိုးမိုးဆိုလားပဲ၊ အဲဒီကောင်မလေးလာလိမ့်မယ် သူတို့ က မနက်စာစားပြီးလောက်မှ ၉နာရီလောက်မှ လာမှာ”
“ငါ စတန်း(stand) မှာ တင်ပေးခဲ့ပါမယ်၊ မြင်ကွင်းလည်း ချိန်ပေးခဲ့မယ်၊ စာလုံးတွေတော်တော်ပြီးလို့ မြင်ကွင်းထဲ မမြင်ရတော့ဘူးဆိုမှ ကင်မရာကို ဘေးဘက်နည်းနည်းရွှေ့ပေးလိုက်ရုံပဲ၊ နင် အောက်ကိုပဲ ငုံ့ကြည့်နေစရာမလိုဘူး။ တံတားပေါ်ကိုပဲ ကြည့်နေ လမ်းလျှောက်နေပေါ့ဟာ၊ ငြိမ်မနေနဲ့ ငြိမ်နေရင် ပိုအေးတယ်”
သဇင်တို့ တံတားပေါ် တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တံတားပေါ်မှာ ကင်မရာစတန်းကို နေရာချတယ်။ ဟုတ်ပါရဲ့ လေက ဒီနေ့ တော်တော်ပြင်းနေတာပဲ။ သဇင် တချိန်လုံး ဦးထုပ်ကို လက်နဲ့ ဖိကိုင်ထားနေရတယ်။ နောက်တော့ ညီညီက ဦးထုပ်ပေါ်မှာ ဂျာကင်ရဲ့ခေါင်းစွပ်ကိုပါ ထပ်အုပ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှပဲ နားထဲ လေ၀င်တာလည်း သက်သာသွားတော့တယ်။
“ဒါဆို ငါ သွားပြီနော်၊ နင်ပြောချင်တာရှိရင် ဖုန်းနဲ့ပြောလိုက်”
ညီညီတစ်ယောက်ဟာ သွက်လက်နေတာပဲ၊ မဟုတ်ဘူး သွက်လက်တာထက်တောင် ပိုနေသေးရဲ့၊ ပြာယာခတ်နေတာ။ ဒီလူငယ်လေးဟာ သူလုပ်ချင်တာများ လုပ်နေရရင် လေအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ ဘောလုံးလိုပဲ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွနဲ့ နည်းနည်းလေးမှ မငြိမ်တော့ဘူး။ သိပ်ရယ်ရတာပဲ။ သဇင်တစ်ယောက်တည်း တွေးရင် ပြုံးမိသေးတယ်။ တကယ်တော့လည်း အဲဒီ ဟန်ပန်လေးတွေကိုပဲ သဇင်က ချစ်နေရတာပါပဲလေ။
ညီညီ တံတားအောက်ဘက်က မြက်ခင်းနားမှာရောက်နေပြီ။ လက်နှစ်ဘက်ကို အားကုန်လွှဲပြီး ဝှေ့ယမ်းပြပါတယ်။ ညီညီက မြက်ရိတ်တဲ့စက်ကို အင်ဂျင်နှိုးတယ်၊ သိုင်းကြိုးကို ကိုယ်မှာ လွယ်ပြီး လက်ကိုင်နှစ်ခုကိုထိန်းပေးပြီး ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းကနေ စပြီး ညာဘက် လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင့်တစ်ဖြောင့်တည်း ပေါ်အောင် ရိတ်သွားပါတယ်။ နောက် စာလုံးတစ်လုံးအမြင့်စာချန်ပြီး အပြိုင်မျဉ်းတစ်ကြောင်းရိတ်တယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်ဘက်ဆုံးကနေစပြီး စာလုံးဖော်ပါတယ်။ တံတားက တော်တော်မြင့်တော့ ညီညီ့ပုံစံလေးကို သေးသေးလေးပဲ မြင်နေရတယ်။ မြက်ရိတ်စက်သံတောင်မှ သဲ့သဲ့လေးပဲ ကြားနေရပါတယ်။ တံတားပေါ်မှာ လေတွေက တစ်ချက်တစ်ချက် တိုက်လိုက်ပုံများ သဇင့်ကိုယ်တောင် ရွေ့ပါသွားမတတ်ပါပဲ။ လေပြင်းလာတဲ့အချိန် တံတားဘောင်ကို ကိုင်ထားရပါသေးတယ်။ စာလုံးဖော်ဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတဲ့ ညီညီကတော့ သဇင့်ကို မော့တောင် မကြည့်ပါဘူး၊ ညီညီက စာလုံးအရာပေးတာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်တော့ရှိသား၊ စာရွက်ပေါ်မှာရေးရင် ညီညီ့လက်ရေးလေးတွေက ပဲပင်ပေါက်လေးတွေလို ဟိုယိမ်း ဒီယိမ်းနဲ့ မသပ်မရပ်လေးတွေ၊ အခု ညီညီ ပုံဖော်နေတဲ့ စာလုံးတွေကတော့ ပုံနှိပ်စာလုံးအတိုင်းပဲ ညီညီညာညာ ရှိနေကြသားပဲ။
သဇင် စာလုံးပေါင်းဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ ခ ခွေး ယ ပင့် ... ပြီးတော့ စက်ဝိုင်းပုံဖော်တယ်၊ ပြီးတော့ မျက်ဆန်လေးနေရာမှာ လိုင်းလေးပေါ်လာတယ်။ စလုံးလေး ပုံပေါ့၊ နောက်တော့ ၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက် အသပ်လေးအတွက် လိုင်းလေး ပေါ်အောင် ရိတ်တယ်။ “ချစ်” တဲ့ .... အိုး ... လှလိုက်တာ .. စာလုံးလေးတွေက ညီညီညာညာလေးတွေ။ စာလုံးတွေထဲမှာ အင်္ကျီအဖြူလေးနဲ့ ညီညီကတော့ ဟိုဘက်ပြေးလိုက် ဒီဘက်ပြေးလိုက် တစ်ယောက်တည်း အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲ။ တံတားပေါ်မှာ သဇင်ရှိနေတယ် ဆိုတာကိုတောင် သတိရပုံ မပေါ်ဘူး။ နောက်ထပ် “တ၀န်းပူ” အတွက် စက်ပိုင်းပုံတစ်ခုကို ပုံဖော်တယ်။ စက်ဝိုင်းလေးနဲ့ ကပ်ရက်မှာ “ရေးချ” လို့ အသတ်လေးထည့်လိုက်တော့ “တ၀န်းပူ” ပုံလေးပေါ်လာတယ်။ နောက်တော့ စက်ဝိုင်းပုံ နှစ်ပုံဖော်ပါတယ်။ အပေါ်ဖက်က မြက်တွေကို ရိတ်ပြီးသွားတော့ “ယပက်လက်” ပုံလေးပေါ်လာပြန်တယ်။ နောက်တစ်ခု က “အသပ်လေး”ပေါ့။ အဲဒီ အသပ်လေး ပြီးသွားရင် ပေါ်လာမယ့် စာလုံးလေးက ... “ချစ်တယ်”ပေါ့၊ သဇင့် ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာပြီ။ စာလုံးလေးတွေက လုံးဝန်းပြီး ညီညာနေတာပဲ၊ ပုံနှိပ်စာလုံးတွေလိုပဲ၊ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ညီညီက “ယပက်လက်”မှာ အသပ်လေး ပုံပေါ်အောင် ရိတ်ပါတယ်။ “ယပက်လက်” အသပ်လေးပြီးတဲ့ အခါ စာလုံးလေးတွေ ပိုပြီး ညီညီညာညာရှိနေစေဖို့ အနားသတ်လိုင်းက မြက်လေးတွေကို အသေးစိတ် လိုက်ပြီး ရိတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စာလုံးကနေ စပြီး အနားစွန်းနေရာလေးတွေ သေသေချာချာ ပုံဖော်တယ်။ စာလုံးလေးတွေက ပိုပြီး တိကျသေသပ်လာပါတယ်။ ညီညီ ပုံဖော်နေတဲ့ မြက်ခင်းဘေး လျှောက်လမ်းက ဖြတ်သွားတဲ့ လူတစ်ချို့က ရပ်ပြီး ကြည့်ကြတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေက စကားရပ်ပြီး ပြောကြပါတယ်။ တံတားပေါ်က ဖြတ်သွားတဲ့ လူတွေ ဆီက အသံတွေ ထွက်လာကြတယ်။
“ဟာ ဟိုမှာ .. ချစ်တယ် .. တဲ့ စာလုံးက အကြီးကြီးပဲဟေ့၊ အရင်နေ့တွေက ဒီနေရာမှာမရှိပါဘူး.. ချစ်တယ် ချစ်တယ်” တဲ့ တစ်ယောက်က အံ့အားသင့်စွာ ရွတ်နေတယ်။ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်က သဇင့်ဘေးနားမှာ ရပ်ပြီး စာလုံးပေါင်းဖတ်တယ်။
“ခ ခွေး ..... ယ ပင့်.... မေမေ.. ပြီးတော့ရော”
ကလေးငယ်ရဲ့ဘေးက ကလေးရဲ့မေမေက ...
“စ သပ်လေ သမီးလေးရဲ့ “ချစ်” တဲ့၊ သမီးလေး နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ စာလုံးတွေ ပေါင်းကြည့်ပါဦး၊ ဘာပါလိမ့်” လို့ ကလေးကို ထပ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။
“တ၀န်းပူ ယ ပက်လက် သပ် “တယ်” ပေါ့၊ “တယ်” “တယ်” အဲဒါ မီး သိပါတယ် မေမေရဲ့၊
“ချစ်တယ်”၊ မေမေ့ကို ချစ်တယ်၊ ဖေဖေ့ကို ချစ်တယ်။ ဖိုးဖိုးကို ချစ်တယ်၊ ဖွားဖွားကိုချစ်တယ်၊ မီး မောင်လေး ပိစိကွေးလေးကိုချစ်တယ်”
ကလေးငယ်လေးက ခြေထောက်တွေစုံမြှောက်လို့၊ ခုန်ပေါက်ရင်း အော်နေပါတယ်။
သဇင် ကြက်သီးမွေးညင်းများထောင်ထလို့ လာတယ်။ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ချစ်တယ် ချစ်တယ် စကားသံလေးတွေက နားဝင်ချိုလိုက်တာကွယ်။
ညီညီ့ကို ကြားစေချင်လိုက်တာ၊ ညီညီကတော့ စာလုံးလေးတွေ ပိုပြီး သပ်ရပ်တိကျအောင် ပုံဖော်နေတုန်းပဲ။
ညီညီ .. တံတားပေါ်ကို လှမ်းကြည့်လာပြီ။ လက်နှစ်ဘက်ကို မျဉ်းဖြောင့်လို ဆန့်တန်းပြတယ်။ video recording ကို ရပ်ဖို့ အချက်ပေးပါတယ်။ သဇင် record ခလုတ်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းမြည်လာတယ်။ ညီညီ ပေါ့၊ လေသံတွေကြောင့် ကြားရမလွယ်လို့ အတင်းဖိကပ် နားထောင်ရင်း ညီညီ့ကို လှမ်းကြည့်နေမိတယ်။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေကြားထဲမှာ ရပ်နေတဲ့
ညီညီက လက်တစ်ဘက်ကို ဝှေ့ယမ်းပြပါတယ်။
“သဇင်၊ ဘယ်လိုနေလဲ စာလုံးတွေလှရဲ့လား။ ငါ အခု တံတားပေါ်လာခဲ့မယ်နော်၊ နင် သိပ်အေးနေလား၊ သဇင်၊ ဒီ စာလုံးလေးက ငါ နင့်ကို အပြောချင်ဆုံး စကားလေးပဲ။ သဇင်၊ ကြားရဲ့လား၊ ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်။ သဇင့်ကို ချစ်တယ်။ ငါ တက်လာခဲ့တော့မယ်နော်”
အိုး ... ဒီလူငယ်လေးက ပြောမယ့်ပြောတော့လည်း ...
မောနေဟန်တူတဲ့ ညီညီ့အသံ အက်ရှရှလေး၊ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားသံလေးကို နားထောင်ရင်း အဲဒီအချိန် တခဏလေးမှာ သဇင် အသက်ရှုရပ်သွားခဲ့သေးတာပေါ့။
သဇင့် အနားကို ညီညီ ရောက်လာတဲ့ အခါ ညီညီ့ မျက်နှာလေးကို စေ့စေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ ချွေးတွေစိုရွှဲပြီး နီစပ်စပ်ဖြစ်နေတဲ့ ညီညီ့မျက်နှာလေးဟာ သနားကမားလေး၊ ပြုံးချိုနေတော့တာပဲ။
သဇင့်ဘေးမှာ ရပ်ပြီး စာလုံးတွေကို လှမ်းကြည့်ပါတယ်။
“ဟား ... မဆိုးဘူးနော် သဇင်၊ ငါ့ လက်ရေးလှသားပဲ”
“နင့်လက်ရေးက အမြဲ ပဲပင်ပေါက်လိုပဲ၊ စုတ်ချွန်းချွန်းလေးတွေ၊ အခုကျတော့လည်း ပုံနှိပ်စာလုံးလိုပဲ၊ လုံးဝိုင်းနေတာပဲ၊ ခစ် ခစ်၊ နင်က အဆန်းပဲ”
ညီညီက ပုခုံးလေး တွန့်ပြပြီး ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ ညီညီ့ နှုတ်ဖျားက စကားသံတိုးတိုးလေး ကြားနေရတယ်။ “ချစ်တယ်” “ချစ်တယ်” ဆိုပဲ။
“မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေနဲ့ စကားလုံးတွေ ... အခုလိုဆိုတော့လည်း ကမ္ဘာကြီးက လှနေသားပဲ၊ အဲ မြစ်ကမ်းဘေး ပြောတာ၊ ငါပြောတာ စကားလုံးက နည်းနည်းကြီးသွားတယ်၊ စာလုံးကြီးကြီးတွေ ပုံဖော်လာခဲ့လို့လားပဲ၊ ကမ္ဘာနဲ့ ချီပြီးတော့ကို စကားလုံးကြီးကြီးတွေ နှုတ်ကပါ ထွက်ကုန်တော့တာပဲ ဟား ဟား ဟား”
“သဇင် ငြိမ်မနေနဲ့လေဟာ၊ စကားပြန်ပြောပါဦး၊ ငါ ဘာရေးထားတာလဲ ဖတ်ပြပါဦးဟ”
“ကလေးအထာတွေနဲ့ ငါ့ကို လာမေးမနေနဲ့၊ နင်ဟာလေ”
“ငါ့အတွက်တော့ စကားလုံးကြီးကြီးတွေထဲက နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့ ကမ္ဘာငယ်လေးပေါ့၊ နင် မတောင်းသေးလည်း အဲဒါ ငါပေးတဲ့ နင့်အတွက် အဖြေပဲ”
သဇင် ... ညီညီ့အတွက် အဖြေတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ကြေးနီးတံတားတစ်ဝိုက်မှာ ...
စိမ်းလန်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ လူတော်တော်များများ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ကြပါတယ်။ ။
ပြတိုက်ရှေ့က ကြယ်တွေ .. ကြယ်တွေရှေ့က ပြတိုက်
သူတို့ရဲ့ နေရာမှ မဟုတ်ပဲ
volim(Волим) - love
Hvala(Хвала) - Thank
Lepo - လဲပေါ် (Nice)
လိုင်းတွေအရာပေးတုန်းကတော့ ကြယ်ကြီးတွေက အကြီးကြီးလိုပဲ အပေါ်ကကြည့်တော့ သေးသေးလေးတွေ
ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့မှာ ဧပြီ ၂၆ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ARIJADNINA NIT ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေထဲက Eco - art project "Beautiful Words" နဲ့ Installation at the Museum of Contemporary Art - "So it'salot of stars!" အင်စတော်လေးရှင်းများ(Art Installation on the grass)ကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
ARIJADNINA NIT Site : http://www.ekoartproject.blogspot.com/
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အွန်လိုင်းရွှေဝတ္ထုတိုဆု မှာ အမှတ်ပေး ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည့် အကဲဖြတ်ဒိုင်
၁။ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း (ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်)
၃။ ဆရာမ ဒေါ်နုနုရည် (အင်းဝ)
၄။ ဆရာမ ဒေါ်ခင်ခင်ထူး
၅။ ဦးမင်းဒင် တို့ရဲ့ မှတ်ချက်များ နှင့် အမှတ်များ
ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း .......... ၁၅ မှတ်
စကားလုံးတွေထဲက နင်ဟာ..ငါ့ရဲ့စိမ်းလန်းတဲ့ ကမ္ဘာ( ဖြိုးဖြိုး)
သာမာန်အားဖြင့် ဖတ်မယ်ဆိုရင် အချစ်ဝတ္ထုကလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြသနာကို ဝတ္ထုမှာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးသွားတဲ့အတွက် လှပတဲ့ အချစ်ဝတ္ထုကလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ၁၅ မှတ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဆရာဦးနေဝင်းမြင့်........ ၁၃ မှတ်
စကားလုံးတွေထဲကနင်ဟာ... ငါ့ရဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့ကမ္ဘာ (ဖြိုးဖြိုး)
စိတ်ကူးဆန်းကလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ၀တ္ထုတိုပါပဲ။ ၀တ္ထုတိုရဲ့ tempo ကလျော့သလို ခံစားရတယ်။ ending က ရိုးပါတယ်။ ၁၃ မှတ်။
ဆရာမဒေါ်နုနုရည် (အင်းဝ) ... ၁၂ မှတ်
စကားလုံးတွေထဲက နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့ ကမ္ဘာ
၁. အကြောင်းအရာ - ၃ မှတ်
၂. အနုပညာမြောက်မှု - ၃ မှတ်
၃. စကားပြေအရေးအဖွဲ့ - ၃ မှတ်
၄.ဝတ္ထုတိုပီသမှု - ၃ မှတ်
သုတရသပိုကဲနေပါတယ်။ လူငယ်ဇာတ်ကောင်စရိုက်လေးတွေ ပီပြင်ပါတယ်။ လူငယ်လေး နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာ ဇာတ်ကောင်စရိုက်လေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အနုပညာမြောက်မှုနဲ့ ဝတ္ထုတိုအတတ်ပညာ အားလေး နည်းနေပါတယ်။
ဆရာမဒေါ်ခင်ခင်ထူး.... ၁၇ မှတ်
၀တ္ထုတိုအရေးအဖွဲ့ လိုသေးပေမယ့် ရိုးရှင်းလန်းဆတ်တဲ့ ၀တ္ထုတိုကလေးမို့ သဘောကျမိပါတယ်။ ၀တ္ထုကိုဖတ်လိုက်တော့ ၀တ္ထုထဲကဇာတ်ကောင်တွေဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်များများမသုံးပဲဝတ္ထုကို လိုရင်းရောက်အောင် ရေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ သည်ကနေ့ ခေတ်လူငယ်ကလေးတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးထဲမှာကမ္ဘာမြေကိုချစ်တဲ့စိတ်၊ ပရဟိတအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်လိုတဲ့စိတ် ကိန်းအောင်းဖို့လိုပါတယ်။ လူငယ်တွေကို ပျက်စီးကုန်ကြပြီလို့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းချင်သူကရမ်းပေမယ့် ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သည်လိုကောင်းကျိုးဆောင်လူငယ်တွေ ရှိကြပါသေးတယ်။ ကြုံလည်းကြုံဖူးပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သည် ၀တ္ထုက လူငယ်တွေအတွက် အဆိပ်အတောက်ကင်းတဲ့ချစ်ဖွယ် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်လို့တော့ ဆိုချင်ပါတယ်။ စာအရေးအသား အဖွဲ့အနွဲ့ကတော့ ဆက်ကြိုးစားရဦးမှာပါ။
ဦးမင်းဒင်.............. ၁၃ မှတ်
၅။ စကားလုံးတွေထဲက နင်ဟာ ….. ငါ့ရဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့ကမ္ဘာ (ဖြိုးဖြိုးလှိုင်)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊Ecoart, installation, Artwork စသည့် အကြောင်းခြင်းရာများကို အခြေခံလျက် လူငယ်နှစ်ဦး၏ချစ်ခြင်းကိုဖွဲ့ဆိုထားသော ဝတ္ထုတိုတပုဒ်ဖြစ်သည်။ အနုပညာကို ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အကျိူးအလို့ငှာ ကြိုးစားနေကြသော လူငယ်များကို လေးစားကြိုဆိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းစာစုသည် ဘလော့ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများဖြင့် ပူးတွဲဖော်ပြထားသဖြင့် ဘလော့ဖတ်သူတို့အဖို့ အဆင်ပြေ ဖွယ် ရှိသော်လည်း၊ စာချည်းသက်သက် ဖတ်ရသူတို့အတွက် တစုံတခု လစ်ဟာနေသယောင် ခံစားရနိုင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်သော်ငြား စာရေးသားမှုအတတ်ပညာ အားနည်းသည်ဟု မြင်ပါသည်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်း ဖြစ်တည်ရာသည် မည်သည့်မြို့ရွာဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြခြင်းမရှိချေ။ ဝတ္ထုတိုရေးသားခြင်းတွင် အခြေခံ အချက်ဖြစ်သည့် စာရေးသူသည် သိသိသာသာကြီး၊ ဝင်မပြောရ ဟူသောအချက်ကို သတိမူစေလိုပါသည်။ ၁၃မှတ် ပေးလိုပါသည်။
12:54 PM အက်ဆေး5comments
12:47 PM အက်ဆေး, မေမေ့ရဲ့စာ5comments
ကျမက သူများပြောတိုင်း မယုံတတ်တော့ ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်တာပေါ့။နောက်တော့ အမေ ပြောပြလို့သင်္ကြန်ကျတယ်ဆိုတာ နှစ်သစ်ကူးမှာမို့နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောမှန်း သိလာရတယ်။ ဖေဖေနဲ့ က အဲဒီဘုရားကို တန်ဆောင်တိုင်ညများနဲ့တပိုတွဲညများမှာ အမြဲရောက်လေ့ရှိတယ်။ တပိုတွဲလပြည့်နေ့ညမှာတော့ သနပ်ခါးတုံး မီးပူဇော်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒါက အညာဒေသရဲ့ချစ်စရာ ရိုးရာဓလေ့တခုပါ။ ရှင်မတောင်စစ်စစ် အရွယ်သင့် ဖြောင့်ဖြောင့်တွေကို လေးဒေါင့်ကွက်ကျကျ တတုံးပေါ် တတုံးဆင့်ဆင့် တင်ပြီး တတောင်လောက်ရရင် မီးရှို့ ပူဇော်တာပါ။ “ခင်မေ ..ချမ်းတယ်မို့ လား။ ဘုရားလဲ ချမ်းမှာပေါ့ ၊ သနပ်ခါးတုံးဆိုတော့ မွှေး လဲ မွှေး နွေးလဲနွေး တာပေါ့”တဲ့ ။ ငယ်သေးတဲ့ကျမကို ရှင်းပြတယ်။ ဘုရားယင်ပြင်တော်တခုလုံး မွှေးကြိုင်နေတာကိုလဲ ခုထိ မှတ်မိနေတယ်။ (သိန်းဖေမြင့်ရဲ့အညာပြန်ဆောင်းပါးမှာတော့ သနပ်ခါးတုံးကို စေတီပုံဖေါ်ပြီး မီးရှို့ တယ်ဆိုတယ်။ )
တန်ဆောင်တိုင်ညများဆိုရင် တော့ ဘုရားကအပြန် ကျမတို့ အိမ်ဘေးက ကွပ်ပြစ်ပေါ်မှာ မိသားစုတတွေ အဒေါ် အပျိုကြီးတွေပါ ၀ိုင်းဖွဲ့ ပြီး မယ်ဇလီဖူးသုတ်တွေ တ၀ကြီး လုစားကြတာ ပျော်စရာပါ။
လက္ဘက်ရည်ကြမ်းလေးတကျိုက်သောက်လိုက် မယ်ဇလီဖူးသုတ်စပ်စပ်ခါးခါးလေးတဇွန်းစားလိုက်။ မှတ်မိနေပါတယ်။ ကျမက အဲဒီအရွယ်ကတည်းက အစပ်ရော အခါးရော လက္ဘက်ရည်ကြမ်းရော စွဲခဲ့တာပေါ့။ မယ်ဇလီ၊ ကြက်ဟင်းခါး၊ ကင်းမုံသီး၊ ကြောင်ရှာသီး တို့ ဟာ အခါးဓါတ်နိုင်လို့မျက်စိကို ကြည်လင်စေတယ်လို့မေမေကပြောပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ထင်ပါ့။ ခုထိ ကျမ မျက်စိတွေ ကြည်တုံး ။ မျက်မှန်ဆို ဝေလာဝေး ။
အဲဒီလို မယ်ဇလီဖူးသုတ်တွေ လုယက်စားနေကြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် လမင်းကြီးက အထက်မိုးကောင်းကင်မှာ ရွှန်းရွှန်းတင့်တင့်နဲ့တဖြည်းဖြည်း မြင့်မြင့်တက်လာနေပြီ
ပေါ့။ အို...အေးမြလိုက်တာ။ အင်တာနက် ၊ ဆဲတဲလိုက်ထ်စလောင်း စတာတွေထဲ တချိန်လုံးနစ်မြုပ်နေပေမဲ့ကျမ တခါတခါ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီး ကမ္ဘာကြီးကို BACK လုပ်ပြစ်ချင်တယ်။ စူးရှတဲ့မာကြူရီ မီးလုံးတွေ မလိုဘူး။(လရောင်လေးနဲ့နေချင်တယ်။ ) နေ့တိုင်း နေ့ တိုင်း မိုးလင်းမိုးချုပ် ကမ္ဘာမြေကြီးကို လူသတ်ကွင်းလုပ်ပြီး လူ့ အသက်တွေ ချွေချနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုလဲ မမြင်ချင်တော့ဘူး။ (မီးဖိုချောင်ထဲကနေ ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်မြင်နိုင်ဖို့စလောင်းဆင်ခဲ့ ပေမဲ့ခု မြင်မရဲလို့မလိုချင်တော့ဘူး။ )
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးမှုကိုဖြစ်စေမဲ့ဈေးကြီးကြီး မော်တော်ကားတွေ မလိုဘူး။ ( ခြူသံတလွင်လွင်နဲ့လှည်းယဉ်လေးစီးကြရင် မကောင်းလား။) တဘက်နဲ့ တဘက် အချေအတင် အငြင်းအခုန်တွေနဲ့ဘယ်လိုမှ မပြေလည်နိုင်မဲ့ အီရန်၊ မြောက်ကိုးရီးယား၊ ဗင်နီဇွဲလား ၊ အီရတ်၊ အာဖဂန်၊ ပါကစ္စတန်။ အဇ္မရေးလ် နဲ့ ပါလစတိုင်း လေလှိုင်းသံတွေ မကြားချင်တော့ဘူး။ ( အမေတွေပြောမဲ့ပုံပြင်တွေကိုပဲ နားထောင်ကြအောင်လား။ )
အော် ..အမေဆိုတော့ ..ကျမ အဖေ့ကိုပဲ လွမ်းနေတာ..၊အမေ့ကို မလွမ်းရာကျနေမလားပဲ။ အဖေနဲ့ က အမြဲ လမ်းလျှောက်နေကျမို့ ပါ။ အမေက အိမ်မှာ စာပဲ ဖတ်နေတာမို့ ညညကျမှပဲ ဇတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ ပုံပြင်တွေ ဒိုင်ခံ ပြောပြတတ်တာလေ။ အမေများပုံပြောရင် ပုံက မဆုံးနိုင်ပဲ ကျမတို့ လဲ မအိပ်နိုင် မျက်စိ ပိုပို ကျယ်လာတော့တာပဲ။ အမေ ပုံပြောရင် အဖေက အမေ့နားက ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာထိုင်ရင်း စိပ်ပုတီး တဂျောက်ဂျောက်စိပ်လို့ပြုံးပြုံးကြီး နားထောင်လေ့ရှိတယ်။ အမေက သူ့သား ဗေဒါကြီး ( သန်းစိန်သစ်) အကြောင်း ပုံလုပ်ပြီးလဲ မမောနိုင် မပန်းနိုင် ပြောတတ်ပါသေးရဲ့ ။
ကျမက သမီးတယောက်ထဲ ဆိုတော့ အဖေ့အပေါ် ခပ်ချွဲချွဲရယ်။ အဖေ့လက်ဆွဲပြီး ကပ်လိုက်နေကျ။ အဖေနဲ့ က ပိုရင်းနှီးနေသလိုပဲ ။ အဖေ့ကိုပိုချစ်တယ် ပြောရင်ရမယ်ထင်ရဲ့ ။ ခေါ်တာတော င် “အဖေ” လဲ မဟုတ်။ “ဖေဖေ” လဲ မဟုတ် ။ “ဖေ..ဖေ့ “ တဲ့ ။ အမြဲတမ်း “ဖေ..ဖေ့ “ လို့ခပ်ချွဲချွဲလေး အစပျိုးခေါ်တတ်တာလေ။ တခုခုပြောချင်ရင် “ဖေ..ဖေ့ “လို့ စတော့တာပဲ ။ အဖေကလဲ ဒီလို ခင်မေ ချွှဲတတ်ပုံ လူလာတိုင်း စကားလုပ် ပြောတတ်ပါတယ်။
အဖေ့နာမည်က” ဦးဘသစ် ” ရန်ကုန်သား ဘုန်းကြီးလမ်းမှာ မွေးပါတယ်။ နှာတံပေါ်ပေါ် မျက်လုံးမျက်ဆံ ကောင်းကောင်း ၊ပိရိသေသပ်တဲ့နှုတ်ခမ်းပိုင်ရှင်မို့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသာ့း“ဘရုစ်ဝဲလစ်စ် “ နဲ့တောင် ခပ်ဆင်ဆင် ။တကယ့်ကိုခန့် ချောကြီးပါ။ အဖေက ဒုလ္လဘရဟန်းခံပြီး ဆံပင်မထားတော့ပဲ ကတုံးနဲ့ နေခဲ့ တာမို့ ဘရုစ်ဝဲလစ်စ် များ ကတုံးနဲ့ ဆိုရင် ချွတ်စွပ်လို့တောင် ဆိုရမလားပဲ။ အဲဒလောက်တူတာ။ အဖေက မြင်းစီးလဲကျွမ်းတော့ ရှမ်းဘောင်းဘီ အပွကြီးနဲ့ 
အဖေမို့ မြင်းစီးသွားရင် လူတိုင်းက ဇတ်လိုက်လို ငေးကြည့်ကြသတဲ့ ။ အဖေတို့ ခေတ်က ကုလားစကားအသုံးများသတဲ့။ ကုန်သည်လဲဖြစ်နေတော့ အဖေရော အမေရော ကုလားစကားတတ်ကြတယ်လေ။ အင်္ဂလိပ်စာတော့ မတတ်ကြဘူး။ မိဘတွေက ဆင်းရဲလို့အဖေက ကျောင်းကောင်းကောင်းမနေခဲ့ ရဘူး။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဓါတ်ရထားမောင်းပြီး ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းခဲ့ ရတယ်။ ။ လိုင်စင် ပုံကလေးထဲမှာ အဖေက သံပုရာခွန်ပုံ ကုလားဦးထုပ်ဆောင်းလို့။မုံရွာမြို့ ကြီးတမြို့ လုံး မီးလောင်စဉ့် ဓါတ်ပုံတွေ ပြောင်သလင်း ခါအောင်ပါသွာတယ်။
အဖေက အမေနဲ့ ဆုံချင်တော့ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်နဲ့အညာရောက်လာပြီ့း ။သူဋ္ဌေးကြီး ဦးရွှေဝ +ဒေါ်ရွှေမ တို့ ရဲ့ သမီးကို အရယူနိုင်အော င် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှိသူပါ။ ဇွဲရှိတယ် ။လုံ့လ၀ိရိယရှိတယ်။ ကတိသစ္စာတည်တယ်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်။ ဒီအရည်အချင်းတွေက အဖေ့ကို ကြီးပွားချမ်းသာစေခဲ့ ပါတယ်။ အဖေနဲ့ အမေက အိမ်ထောင်ကျပြီး ၄နှစ်လုံးလုံး သားသမီးမထွန်းကားဘူးတဲ့ ။ ဘုရားသွားကျောင်းတက် ပျော်မွေ့ နေရာက မောင်ကြည်ရှင်ဖြစ်မဲ့ ခလေးကို ရရော ။စီးပွားရေးဖက်ခြေဦးပြန်လှည့်ကုန်းရုန်းရှာဖွေကြရတယ်တဲ့ ။
သားသမီးသုံးယောက်လဲရ ကျမတို့ အခေါ် ရဲတိုက်ကြီးကိုလဲ ဆောက်နီုင်ခဲ့ တယ်တဲ့ ။ ကျမကို အဲဒီအပေါ်ထပ်မှာမီးဖွားသန့်စင်ခဲ့ တာပါ။ ကျမ ၂နှစ်သမီးမှာပဲ အလှူကြီးပေးပါတယ်။ အဖေကိုယ်တိုင် ရဟန်းခံပြီး သားနှစ်ယောက်ကို ကိတ္တိမသား ရှင်လောင်း၁၂ပါးနဲ့ အတူ သာသနာ့ဘောင်သို့သွတ်သွင်းချီးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ကျမကိုတော့ နားသရုံပါပဲ။ ကျမက ဒီတုံးက ခပ်ဆိုးဆိုးရယ်။ အကိုတွေကတော့ မှန်စီရွှေချ ဦးကော့ဘိနပ်နဲ့ ။ ဖုံအမြင့်နဲ့ ၊ ကရ၀ိတ်ဖေါင်နဲ့။
လှည့်လည်ပြီး ကျမကိုတော့ မိန်းခလေးမို့ ဂျစ်ကားနဲ့တင်လှည့်တာဆိုတော့ မကျေမနပ်နဲ့တွက်ကပ်ပြီး စိတ်ကောက်နေလို့ဓါတ်ပုံထဲ မှာ နှုတ်ခမ်းကို စူထော်နေတာပဲ။
ဒီတုံးက စိန်ဗေဒါကြီး ဗျောညွန့် နဲ့နေ့ရော ညပါ ဧည့်ခံသတဲ့ ။ စိန်ဗေဒါကြီးက “ ရဲရဲတောက်..တို့့ဗမာပြေ သတ္တိခဲတွေ ..ရာဇ၀င်ထိုးလောက်အောင် ..စွန့် ပေ ..” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဆိုတာကိုး။ အဲဒါ ... ညီစေနော် ..တို့ ရဲဘော် ..ချီတက်ကြစို့တူပျော်ပျော် ..ဆိုတဲ့ အပိုဒ်လဲ ရောက်ရော ကိုဗေဒါလေးက ရှင်လောင်းဝတ်ကြီးနဲ့နေရာကထပြီး “ဘယ်ညာ..ဘယ်ညာ “ နဲ့ချီတက်ဟန်ပြု အော်သတဲ့ မဏ္ဍပ်က အိမ်ရှေ့ လမ်းမကြီးကို ကျော်ခွပြီး ကားအသွားအလာမပျက်အောင် တခန်းတနားဆောက်သတဲ့ ။ အမေကလေ သူ့့အလှူကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အားပါးတရ ပုံလုပ်ပြီးလဲ ပြောတတ်တာပါ။ အဖေကလဲ အမေမို့ပုံပြောရင် စိပ်ပုတီးစိပ်သလို ဘာလိုလိုနဲ့ အမေ့နားက ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ လာထိုင်ပြီး ပြုံးပြုံးကြီး နားထောင်လေ့ရှိတယ်။ခုထိမြင်ယောင်ဆဲပါ။ဥစ္စာဟူသည် မျက်လှည့်မျိုး တဲ့ ။ ၁၉၄၂ခုနှစ်ကထင် ပါတယ်။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်က ဗမာပြည်ကိုပါ ကူးစက်လာတယ်။ ခေတ်ပျက်ကြီးနဲ့ ကြုံရ ဆုံရတော့တာပဲ။
အမေတို့ ကလေ ..ဗမာတွေ ကျွန်ဖြစ်တာ သခင်ဖြစ်တာ အရေးမစိုက်ဘူး။ စီးပွားရှာလို့ လဲ ကောင်း.. တိုင်းပြည်လဲအေးချမ်းတည်ငြိမ် မှုရှိ ၊ရွှေလက်ကောက်တွေ တတောင်ဆစ်အထိ ၀တ်ပြီး တောလမ်းခရီးသွား ၊တောင် ဘေးမရှိ ရန်မရှိ နဲ့ မို့အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်ပုံ ကောင်းတယ်ဆိုပြီးလွမ်းနေကြတာပါ။
နိုင်ငံရေးအသိစိတ်ဓါတ်မရှိပါဘူး။ အဖေက ဘုတလင်မြို့ဈေးရပ်မှာ ကုန်မျိုးစုံ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားပါတယ်။ အထည်အလိပ် ၊ထီးဘိနပ်၊ သင်္ကန်းပရိက္ခရာ၊ ဓါတ်စက်ဓါတ်ပြား။ပိုးထည် ချည်ထည် ၊တိုင်းရင်းဆေး ပါမကျန် ရောင်းချပါတယ်။ ဆံကုန်သည်လဲ လုပ်ဖူးတယ်။နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းက ရွှေထည်ငွေထည် ပစ္စည်းနဲ့ပန်းတိမ်ပါပဲ ။ ဆိုင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ အဖေတို့ က ဓါတ်ပြားတွေလဲ ရောင်းတော့ ဇာတ်ထုပ်အသစ်ရောက်ပလားဆိုရင်.. ည ည အော်လံကြီးတပ်ပြီး တရပ်ကွက်လုံး ကြားအောင် ဖွင့်တော့တာပဲ။ အစမ်းဖွင့်တာပါ။ ဓါတ်ပြားကြော်ငာနည်းတမျိုးပေါ့လေ။ အရပ်ထဲက ရင်းနှီးသူ လူကြီးလူငယ်မရွေး အိမ်ဘေးက ကွပ်ပြစ်ပေါ် လာထိုင်ပြီး နားထောင်ကြတယ်။ အမေက ရေနွေးကြမ်း တအိုးပြီးတအိုးချပေးသတဲ့။ အမြီးက လက္ဘက် ပဲလှော် ၊ထညက်အပြင် ငရန့်ခြောက်မီးကင် တောင်ပါသေးတာပါ။
ဇာတ်သဘင်ဝါသနာပါသူတွေကတော့ စောစောကြိုတင်ရောက်လာကြပြီး “ကိုဘသစ်ရေ..ဒီကနေ့ည ဘာဇာတ်ထုပ်ကျမလဲဗျ “ လို့မေးတတ်ကြတယ်။ ဓါတ်ဆီ ဓါတ်ဆံ ပျက်လုံးများဖွင့်ရင် လူတွေ တသေါသေါ တဝေါဝေါနဲ့တိုးမပေါက်ဘူး။ ဒီတုံးက ဖိုးစိန် ၊ရွှေမန်း နန်းတော်ရှေ့ ။ ကျော့အုံးလှိုင်၊ ဆိုတဲ့ နာမည်တွေ ကြားဖူးခဲ့ ပေမဲ့ကျမက ဇာတ်သဘင်ကို မကြိုက်ခဲ့ ဖူး။ အဲဒီမှာ အမေ့သား ဗေဒါကြီး ပြောပါတယ်။ ဇာတ်ထုတ်ထဲက မင်းသားက ငိုချင်းချရင် သူကပါ လိုက်ပြီးငိုချင်းချသတဲ့ ။ မနေနိုင်ဘူး။ “ ကျနော်၏ အမျိုးကို ထုတ်ဖေါ်လို့ ပြောရမှာဖြင့် ..ဓါး.. ဂုတ်ပေါ်မှာ ၀ဲ ... ဟဲ ...ဟဲ..ဟဲ ..။၀ဲ ..ဟဲ ..ဟဲ...ဟဲ...” လို့ထအော် ပြီး လက်မောင်းကအင်္ကျီစကလေးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ဟန်ပြုသတဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ သူ ကြီးလာတော့ ရုပ်ရှင်ဘက် ရောက်သွားပြီး မောင်ကြည်ရှင်ကသာ ဇာတ်သဘင်ဘက် ရောက်သွားတါပါ။ ကျမကတော့ သမိုင်းတွေ ၊ ပထ၀ီတွေနဲ့ ပဲ ပျော်နေတာ။ ဇာတ်ပွဲကိုမကြိုက်ပါဘူး။ ယောင်္ကျားတန်မဲ့သိက္ခာမဲ့ ငိုနေတာလို့ရှုမြင်ပြီး ပန်းတွေပန် ဆံထုံးထုံး နားကပ်ကြီးတ၀င်းဝင်းနဲ့မိန်းမအများကြီး တွဲကနေတာမျိုးကို ဘယ်လိုမှ ကြည့်မရခဲ့ ဘူး။
ဒါနဲ့ပြောရအုံးမယ်။ အဖေတို့ က ပဒုမ္မာပိတ်အုပ်တွေလဲ ရောင်းတာကိုး။ “ခင်မေစိန်” ပဒုမ္မာအုပ်ဆိုတာပေါ်သတဲ့။ တံဆိပ်ပေါ်က “ခင်မေစိန့်”့ရုပ်က မေရှင်တို့မေမြင့်တို့လို ဆံပင်လေးတွေ နဖူးမှာချလို့ ။ နောက်မှာ ဘီးကျော်ဆံပတ်နဲ့ပန်းကလေးတွေ မခို့ တရို့ ပန်။ ဇာနားတပ် ရင်စေ့အင်္ကျီကလေးဝတ် ယဉ်ယဉ်လေး ပြုံးပြီ့း ထိုင်နေသတဲ့ ။ မောင်ကြည်ရှင်ဖြစ်မဲ့ သူက သဘောကျပြီး ညီမလေးမွေးရင် “ခင်မေစိန်” လို့ခေါ်မှာ လို့ပြောသတဲ့ ။ မေမေက ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ကျမကိုလဲ မွေးရော ၊ တန်းပြီး “ခင်မေစိန်လေးရေ... ခင်မေစိန်လေးရေ...” နဲ့ခေါ်နေသတဲ့ ။မောင်ကြည်ရှင်ကကျမထက် ၈နှစ်ကြီးးတာကိုး။ အမေကပြန်ပြောတာပါ။
အဒေါ်အပျိုကြီးတွေကလဲ တမှောင့် ။ ကျမကို “ မြင့်မြင်”့ တဲ့ ။ တိုက်ကြီးရဲ့ အမြင့် အပေါ်ဆုံးအထပ်မှာမွေးလို့တဲ့ ။ ခေါ်ပြန်ရော။ ကျမ အထက်တန်းကျောင်းရောက်တော့ မြင့်မြင့်လဲ မကြိုက် ခင်မေစိန်လဲမကြိုက် ကျမချစ်တဲ့ ဖေဖေ့နာမည်ယူပြီး “ခင်မေသစ် “ ပြောင်းလိုက်တာပါ။ ကဲ ။ဘယ်လောက်လှသလဲ။ ဒီနာမည်။ ခင်မေစိန်ခေါ်ရင်မကြိုက်ဖူး။ “စိန်”ပါနေလို့ ပါ။ ဖိုးစိန် ၊ကက်နက်စိန် ၊ စိန်အောင်မင်း အကုန်မုန်း။ ဇတ်မင်းသားတွေကိုမုန်းတာပါ။ ( အရေးထဲ ပြောင်းဖူးဆေးလိပ်ထဲ
ရွှေဒင်္ဂါးထည့်ပေးတဲ့အပျို အုပ်စုမှာ မေမေများ ပါနေမလား တွေးပူမိသေး။ ) မေမေကလေ ကျမကိုမီးဖွားပြီး မီးတွင်းမှာ သွေးလန့့် သတဲ့ ။ နို့ မထွက်လို့နို့ ထိန်းအိမ်မှာ
နို့ သွားစို့ ရပါတယ်။ ၆လကြာပါတယ်။ အဖေနဲ့ အမေက မနက်တခေါက် ညတခေါက် မှန်မှန်လာကြည့်တယ်ပြောပါတယ်။ ကျမနဲ့နို့ စို့ ဘက်တွေ ရှိပေမဲ့မသိပါဘူး။
အမေက အဖေနဲ့စီးပွားရေးကိုမဲ လုပ်နေရလို့ကျမတို့ မောင်နှမ သုံးယောက်စလုံး အဒေါ်အပျိုကြီးတွေ လက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ ရတာပါ။ (မေမေက ခလေး၃ယောက်လောက်ကို အထိန်းတွေ အယတွေနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလည် ထားခဲ့နိုုင်ပေမဲ့ကျမမှာတော့ ခလေး(၇)ယောက်ကို အဲလို မထားခဲ့ နိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်တိုင် ရင်အုပ်မကွာ ရင်ခွင်ပိုက် နို့ တိုက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက် ကြွေးမွေးခဲ့ တာပါ။ ဘယ်လိုသတ္တိတွေကများ ကျမကို ဦးဆောင်ခဲ့ ပါလိမ့်လို့ခု ကြီးလာမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အံ့သြရင်း မေးခွန်းတွေ အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်နေမိတော့တယ်။ )
အဖေကလေ..ကျမတို့ ကို စာတတ်စေချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာကိုပေါ့။ ပထမ ကျောင်းစနေနေချင်း ဘုတလင်က ဆရာလေးဦးဘိုးဥာဏ်ကျောင်းမှာ
နေရပါတယ်။ အမေ့ညီမအရင်း ဆရာမကြီး ဒေါ်ငွေကြည်ရဲ့ခင်ပွန်းပါ။ ဒေါ်ငွေကြည်များ မျက်လုံး တချက်ပြူးကြည့်ရင် တကျောင်းလုံးသာမက ဦးလေးဥာဏ်တောင် ဖိန့်ဖိန့်တုန် ကြောက်ရတာပါ။
တနေ့ တော့ ကျမတို့ မုံ့ စားဆင်းချိန် မဟာဗန္ဒုလပန်းခြံ (အစစ်ပါ) သွားပြီး ဇီးတော်သီးတွေ ခူးစားကြတာပေါ့။ ဒီတုံးက သူငယ်ချင်း သုံးလေးယောက် ပါခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အပြန်ကျတော့ ကျောင်းကတက်နေပြီ။ ခြံက နဲ နဲ လှမ်းတာကိုး။
ကျောင်းခန်းအ၀င်ဝကနေ ဆရာမကြီးက စောင်ြ့ပီး ကြိမ်နဲ့ဆော်တော့တာပါပဲ။
အဲဒီကျောင်းမှာ ကျမတို့ဇာထိုး ပန်းထိုး သင်ရတယ်။ မှတ်မိသေးတော့တယ်။ဇာထိုးအပ်က ၀ါးနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ နှစ်ချောင်းထိုးတချောင်းထိုးအားလုံးဝါးနဲ့ ချည်းပဲ အချောသပ် လုပ်ထားတယ်။ ကျမက အဲဒီကတည်းက ဇာထိုးအပ်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့ တာပါ။ ကျောက်သင်ပုန်း ကျောက်တံ သုံးတဲ့ ခေတ်မို့ကျောက်တံကို ရေဆွတ်ဆွတ်ပြီး ချွန်နေအောင် သွေးရတာကိုလဲ မမေ့ပါဘူး။
ဆရာကြီး ဆရာမကြီးက ခြံဝန်းအကျယ်ကြီး လယ်ယာမြေပိုင်သူမို့ လဲ လယ်လုပ် ယာလုပ်သူတွေ လာပို့ တဲ့ နှမ်း၊မြေပဲ ငရုပ်စတာတွေ ဖျာကြီးနဲ့ကျောင်းသားတွေက လှမ်းပေးကြရတယ်။
မြေပဲအကြောင်းပြောရာကနေ စက်ဘီးကလေးနဲ့လွယ်အိပ်ကလေးချိတ်ပြီး ပဲလှော်သွားဝယ်တာ ပြေးအမှတ်ရမိရော။ ပဲလှော်က ပဲကြားလှော်ပါ။ ခါးသက်သက်လေး။ လှော်နေတုံး ဖိုထဲက ထည့်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ ပူပူနွေးနွေး လေး။ကျွှတ်ပြီးမွ ရွ နေတာပဲ အက်ကွဲကြောင်းကလေးတွေမှာ ဆားလှော်ဝင်နေတာကြောင့် စားလို့ အရသာရှိတယ်။ တမတ်ဘိုးဆို လွယ်အိပ်လေးနဲ့ တလုံးအပြည့်။ မတ်ပဲ ဘယာကြော်လဲ ၀ယ်ဖူးတယ်။ မေမေက မတ်ပဲဘယာကြော် ကျွတ်ကျွတ်ကလေးကို ကြက်သွန်ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ပြန်ပြီးနှပ်ပေးတော့ သိပ်စားကောင်းတာပဲ။ ကျမတို့က အသားမစားတော့ ကြံဖန်စားတတ်ကြတယ်။
တခါတော့ အကြော်ဝယ်အပြီးအပြန် အိမ်လဲပြန်ရောက်ရော.. လေယာဉ်ပျံကြီးက “ ဝေါ “ ဆို ခေါင်းပေါ်ရောက်လာရော။ ဗုံးကျင်းထဲရောက်အောင်ပြေးဘို့ အချိန်မရတော့ဘူး။
ကျမက အိမ့်အောက်ထဲ ၀င်ပြေးပါတယ်။ အ်မ်က ချေတံရှည်ဆိုတော့ ၀င်ပုန်းလို့ ရတာပေါ့လေ။ ပုန်းရာကနေ ခေါင်းမော်ပြူကြည်တော့ လား..လား တောင်ပန့် တကားကား အကောင်ကြီးကြီး ဧရာမ လေယာဉ်ပျံကြီးပါလား။
အကောင်ဆိုလို့တခုပြောစရာ ကြုံလာပြန်ပါပကော။ ကျမတို့သားအဖ အန္တရယ်တခုနဲ့ထိပ်တိုက်တိုးခဲ့ ရပုံ ပြောပဲ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ကျမတို့ အိမ်ခေါင်ရင်းက ဆရာ ဦးဘကြည်တဲ့သမီးက တင်တင်မြတဲ့ ။ ဘာဆရာလဲကျမ မသိပေမဲ့တင်တင်မြက ညနေတိုင်း စပို့ ရှပ်အင်္ကျီဘောင်းဘီတိုလေးဝတ်ပြီး ခြင်းခတ်လေ့ရှိတယ်။ ပေါင်တံ သွယ်သွယ် လှလှ လက်တံသွယ်သွယ်လှလှလေးမို့အလွန်ကြည့်ကောင်းတယ်။ ဦးဘကြည်နဲ့တခြားလူသုံးယောက် အမြဲ ခြင်းကစားကြတယ်။ တညနေခင်းတခုမှာ အဲလို ခြင်းခတ်နေရာက ဦးဘကြည်က လှမ်းအော်တယ်။ “ ဦးဘသစ် ရေ ..မြွေ မြွေ “ တဲ့ ။ မြွေကိုတော့ မမြင်ရပါဘူး။ ဦးဘကြည်အိမ်စည်းရိုးနဲ့ ကပ်နေတဲ့ကျမတို့ အိမ်ဘက်က မြေကွက်လပ်ကြီးက မြက်တောစိမ်းကြီး ရှည်အုပ်နေတော့ ဘာမှ မမြင်ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အတန်းလိုက် မြက်ဖျားလေးတွေ ယိမ်းခါနေတော့ တခုခု အကောင်တကောင် ကောင် ပြေးလာနေမှန်း အဖေက သိတယ်တဲ့။ကြောင်လေးတကောင်က အမြီးဖျားကို လိုက် ကစားနေတာပါ မြင်နေရတယ်။ မကြာပါဘူး မြွေပြေးလာတာမြင်နေရပါပြီ။ မြွေဦးခေါင်းက ကျမတို့ ဘက် ဦးတည်မနေပါဘူး။ အရှေ့ဘက်ကို ဦးတည်နေတာပါ။ ကျမတို့ က မြောက်ဘက်ကျတယ်။ ဖေဖေက အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ဝေးဝေးသွားအောင် ဘိနပ်နဲ့ချွတ်ပေါက်တယ်။ ဒီတော့မှ မြွေက ရှူးကနဲ ပါးပြင်းထောင် ခေါင်းလှည့်လာပြီး ကျမတို့ ဆ်ီတဟုန်ထိုး ပြေးလာတော့တယ်။ဖေဖေက ကျမကို “ အိမ်ပေါ်တက် နေ ၊အိမ်ပေါ် တ က်နေ “ လို့ပြောပေမဲ့ကျမမလှုပ်ရဲဘူး။ ကြောက်ကြောက်နဲ့အဖေ့ကို တွယ်ကပ်နေတော့ အဖေလဲ ဘာမှ လုပ်မရဘူး။ မြွေကလဲ အသေလိုက် ။ကျမနဲ့ အဖေလဲ နောက်ဆုတ် နောက်ဆုတ်နဲ့အိမ်ထဲဝင် ။အဖေက ကျမကို ညာဘက်လက်နဲ့ကာထား။ ဘုရား ဘုရား ကျမတို့နှစ်ယောက် ဘယ်သူအယင် အပေါက်ခံရမလဲ ။ မတွေးရဲဘူး။ မြွေက ပါးပြင်းထောင်ပြေးလာတာ ။ကျမတို့က နှစ်ယောက်သား လုံးထွေးလုံးထွေး နောက်ဆုတ် နောက်ဆုတ် ပြေးရင်း မီးဖိုထဲ အရောက် ။မြွေက မီးဖိုချောင် ခါးပန်းကို ကျော်အတက် အဖေက ဖင်ထိုင်ခုံ အပုလေးကိုလှမ်း ကောက်အပေါက်။ အို ဘာပြောကောင်းမလဲ ။တခါတည်း ။မြွေကြီး လည်ပင်း တန်းမှန်တော့ ဇက်ကျိုးကျတော့တာပဲလေ။ပါးပြင်းကြီးခွေကျသွားတာ။
ဒီတော့မှ လူတွေပြေးလာကြ။ မြွေကြီးကို လေးဒေါင့် သံပုန်းကြီးတခုထဲ ထည့်။မြွေက နဲနဲမှကို မလှုပ်တော့တာ။ မနက်စောစော တောထဲ ပြန်သွားလွှတ်ခဲ့ပေမဲ့သေသွားခဲ့ပါပြီ။ ဖေဖေက လေ သတိရတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ ။သေစေလိုတဲ့ဆန္ဒ မရှိကြောင်းနဲ့ခုခံကာကွယ်ရင်း လက်လွန်သွားတာပါလို့ဘုရားရှိခိုရင်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့မေတ္တာပို့တယ်။
ဒီလို ပါးပြင်းထောင်လိုက်တဲ့ မြွေမျိုးကို ကျမ ကုလားရုပ်ရှင်တွေမှာ ပဲ တွေ့ ဖူးတာပါ။ လုံးပတ်က လူကြီးလက်မောင်အိုးတခုစာလောက်တုတ်တာပါ။ အရှည်ကြီး။ မြွေဟောက်ငန်းစောင်း သိန်းဆုပေါင်းဆြို့ပီး ထီထိုးပေမဲ့မပေါက်ပါဘူး။ အဲဒီညက ကျမ အကြောက်လွန်ပြီး အပြင်းဖျားတာမှ လိမ့်နေတာပဲ။ ကိုးကွယ်နေကျ ဘုန်းကြီးဆီမှာ နဂရာအဖျားဖြတ်ဆေး အဖေတောင်းပေးပါတယ်။ ဆေးလုံးလေးတွေက ကြွက်ချေးတုံးအတိုင်းပဲ။ အရသာတော့ရှိတယ်။ ရေချိုးပြိးတိုင်း ရေနွေ လေးနဲ့ ကြို သောက်ထားရင်ဘယ်တော့မှ မဖျားဘူးတဲ့ ။ ဘုန်းကြီးက ကျမဆို တော်တော်ချစ်တယ်။ ခင်မေ ခင်မေ နဲ့ ။ဘာပေးပေး ခင်မေ့ဘို့။ခင်မေ့ဘို့ နဲ့ ။ ပဲလှော်၊ ငှက်ပျော၊ ထညက် ၊ မုံ့ ဆီကြော် မပြတ်ဘူး။ လူကမလှူရဖူး။ ဘုန်းကြီးက ပြန်လှူနေတယ်။ ကျမက အကြောက်လွန်ရင်ဖျားတတ်တာ သ်ိပ်ဆိုးတယ်။ တခါလဲ ကျမနဲ့ဖေဖေနဲ့လေယာဉ်ကွင်းဘက် လမ်းလျှောက်သွားရာမှာ (စစ်အတွင်းယာယီသုံးဘို့ အရေးပေါ် ဆောက်လုပ်ထားတာ ) စစ်သားတချို့ မြေမှာဝပ်ပြီး သုံးချောင်းထောက်စက်သေနပ်ကြီးချိန်ထားတာမြင်ပြီး ညလဲရောက်ရော ဖျားတော့တာပဲ။ စစ်သားဆိုလို့ကျမတို့ စစ်ပြေးရသေးတာ အမှတ်ရပြန်ရောလေ။
တနေ့ညကြီးမင်းကြီးဖေဖေက ရေနံဆီ မီးခွက်ကလေး မှိန်ပျပျမှာ မြေကြီးထဲ တွင်းတူးပါတယ်။ တွင်းတူးပြီးရွှေထည်ပစ္စည်းတွေ အိုးတလုံးထဲ ထည့်မြှုပ်ပါတယ်။ ကျမတို့ပြေးကြရမယ်လို့လဲ ဖေဖေကပြောတယ် ။အဲဒီညမှာပဲ ကျမတို့ စစ်ရှောင်ဖို့လှည်းကလေးနဲ့နှောယင်း ဆိုတဲ့ရွာကလေးကို ပြေးကြပါတယ်။ စစ်ကြောင့် ပြေးရ လွှာရပုံတွေ ၊ ဓါးပြတိုက် အိမ်မီးရှို့၊ ပြန်ပေးဆွဲ စတဲံ့ ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံရသမျှတွေ အားလုံး မေမေက ပုံလုပ်ပြီး အမြဲပြောခဲ့ တာပါ။ ခါးသီးနာကျင်စရာတွေဆိုပေမဲ့...တရားသဘောနဲ့ ဖြေသိမ့်နိုင်ကြပြီ့း နိုင်ငံရေးအမြင် မရှိကြပါဘူး။ စစ်ပြီးခေတ် ဒိဘက် ပြည်သူပိုင်သိမ်းတဲ့ ခေတ်မှာလဲ လယ်မြေဧကတော်တော်များများ ဝေခြမ်းရေးထဲ ပါသွားပြန်တယ်။
အဖေပြောတာကျမ ခုထိ ကြားယောင်နေတဲ့ စကားတခွန်းရှိပါတယ်။..( အဖေတို့ က လယ်မြေပိုင်တယ်သာဆိုတယ် ကိုယ်တိုင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ ..သူတို့ ပေးသရွေ့ ပဲ ရတာပါ။သီးနှံ မအောင်လို့။မိုးဖျက် ပိုဖျက်လို့နဲ့ရသင့်တာတောင်မရဘူး။ ကိုယ်က တောထဲ မှ မလိုက်နိုင်တာ။၊လူတွေက မြေရှင် ယာရှင်တွေကိုပဲ ဘာညာပြောနေကြတာ မြေရှင် ယာရှင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ )တဲ့ ။ ကျမတို့ တခါတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်ကိုပြေးမှန်းမသိ ပြေးရင်းလွှားရင်း နောက်ကလူအုပ်ကြီးလိုက်လာသံကြားလို့ ဆိုပြီး နီးရာ တဲကြီးတလုံးထဲ ၀င်ပုန်းပါတယ်။ မကြာပါဘူး။ လူသံတွေ ဆူဆူညံညံနဲ့အုပ်လိုက်ကြီးရောက်လာပြီး “ဟေ့ တဲထဲမှာ ဘယ်သူရှိသလဲ လှံနဲ့ ထိုးလိုက်ရမလားတဲ့ပြောပြောဆိုဆိုပဲ လှံ့ကြီးက ထရံဖေါက်ပြီး တဲထဲဝင်လာပါရော။ မေမေ့ရင်ဝနဲ့သီသီကလေး လွတ်သွားတာပေါ့။့တဲထဲ ရောက်ရောက်ချင်း မေမေက ကျမကို ရင်ခွင်ထဲထည့် ကြက်မကြီှးဝပ်သလို မြေမှာပြားပြားဝပ်ပြီးတော့ အကိုနှစ်ယောက်ကိုလဲ ဂုတ်ကနေ ဆွဲနှိမ် ၀ပ်ချပေးတာမို့ကံကြီးသွားတာပါ။ ဒီတုံးက ဖေဖေ့ကိုလဲ တောကြောင်တွေ ဆွဲခေါ်သွားပြီး ငွေတောင်းပါတယ်။ အမေက ငွေသား မရှိပါဘူး။ရွှေနဲ့လဲ ရွေးခဲ့ရတာပါ။ ပြန်ပေးသမားတွေက အဖေ့ခြေသလုံးတွေကို လှံနဲ့ ဆွထားလို့ဒါဏ်ရာတွေ ဗလပွနဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါဘူး။ လှည်းနဲ့ တိုက်ခေါ်ခဲ့ ရတာပါ။ အမေက သစ်ဥ သစ်ဖုတွေရဲ့အာနိသင်ကို နားလည်ပေမဲ့ ပြေးရင်းလွှားရင်း ပုန်းရင်းခိုရင်း လိုချင်တဲ့ ဆေးပင် ရှာမရလို့အခက်တွေ့ နေတာပေါ့။နောက်ဆုံး ကြံရာမရဖြစ်နေလို့ရရာသစ်ရွက်သစ်ခက်တွေ ထုကြိတ်ပြီး အုံကပ်ပေးရင်း...“ ကျွန်တော်မရဲ့ခင်ပွန်းကိုကုသဖို့ဆေးဝါးမရှိပါ။ အနာတရ လုပ်သူမျာကိုလဲ အညိုးအတေး မရှိ ရန်တုံ့ မယူပါ။ ဤစကားမှန်ပါရင် ဤ သစ်ခက် သစ်ဥ များက အစွမ်းထက်သောဆေးဝါးဖြစ်ပြီး အမြန်ပျောက်ကင်းချမ်းသာပါစေ” လို့သစ္စာဆိုပါတယ်။သုံးရက်အတွင်း အယောင်လျော့ကျပြီး ငါးရက်အကြာမှာတော့ ရှင်းရှင်းပျောက်ခဲ့ တယ်လို့မေမေကသူ့ ဘာသူ ဂုဏ်ယူ ပြောဆိုခဲ့ ဖူးတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကျမက စစ်ဆိုရင်မုန်းပါတယ်။စစ်ကြောင့် လူတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ကြသလဲ။ စစ်သားဆိုတာ မုန်းစရာ။ ဟိုငယ်ငယ်လေးထဲကကိုမုန်းတာ။ စစ်ကြောင့်ပြေးရ လွှားရ ။လူတွေ ၀ရုန်းသုဉ်းကားဖြစ်။သေတဲ့ သူသေ ၊ နာတဲ့ သူနာ။ဘယ်မှာ ကောင်းကျိုးရှိမလဲ။ ဒါပေမဲ့ဂျပန်တွေဝင်လာတော့ ဂျပန်စစ်သားလေးတယောက် သူရတဲ့ရာရှင်တွေထဲက နို့ ဆီ ၊ သကြား ၊ ချိုချဉ် ။ ငါးသေတ္တာ စတာတွေ ကျမစားဘို့ တဲ့ ။ လာလာပေးတာမှတ်မိတယ်။သူစစ်အင်္ကျီအိပ်ကပ်ထဲက ဓါတ်ပုံလေးကိုလဲ ထုတ်ပြတယ်။ သူ့ သမီးလေးနဲ့သူ့ ဇနီးပုံပါတဲ့ ။ သမီးက ပက်လက်ကုလားထိုင်လေးပေါ်မှာ အိပ်လို့၊့သူ့ မေမေက ဘေးနားမှာပြုံးရပ်နေတယ်။ ချစ်စရာလေး တွေ။
သူကပြောတယ်။ “စစ်ပွဲတွေကို မုန်းတယ်။ဇနီးနဲ့ သမီးကို မခွဲချင်ဘူး ၊ အမိန့် ကိုနာခံရတယ်။ သူသေမလားရှင်မလားမပြောနိုင်ဘူး “ တဲ့ ။ ကျမကို သူ့ သမီးအမှတ်နဲ့လာပေးတာလို့မေမေကပြောပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မတိုက်ချင်ပဲ တိုက်နေရတဲ့ စစ်သားတွေလဲ ရှိနေတဲ့ သဘောလား။ ကျမစဉ်းစားရင်း သူတို့ ကိုသနားလာတယ်။စစ်ပွဲတွေကို ဖန်တီးနေတဲ့ စစ်ဘုရင်တွေကိုမုန်းတတ်လာတယ်။
ဘုတလင်မှာက မငြိမ်မသက်နဲ့နေ့ အခါ အစိုးရကအုပ်ပြီး ညအခါ ကွန်မြူနစ်တွေကပြန်စီးသတဲ့ ။ ဆက်ကြေးတောင်းသတဲ့ ။ ကွန်မြူနစ်တွေကလဲ အချင်းချင်း နီလိုက် ဖြူလိုက် ကွဲပြဲနေတော့ တာရှည်မအုပ်နိုင်၊ မထိန်းချုပ်နိုင်။ အစိုးရရော သူပုန်တွေပါ ဆုတ်ခွာသွားရင် တောကြောင်တွေကထ ဓါးပြကတိုက် လုယက်မှုတွေဖြစ် ဘယ်သူမှ အေးအေးဆေးဆေး မနေရကြရဘူး။ ကျေးလက်ဒေသက ကုန်သည်ပွဲစားမှန်သမျှ ပြည်တွင်းစစ်ကိုရှောင်ရင်း တိမ်းရင်း စီးပွားလဲ ရှာရင်း ဆိုသလို မုံရွာမြို့ ပေါ် တက်လာကြတော့တယ် တဲ့ ။
အဖေက ရှမ်းတောလမ်း ဒီဇူဇာဆေးတိုက်မှာ အခန်းတခန်း ငှားပြီး ရျွေဆိုင်ဖွင့်ပါတယ်။ သိပ်စုံလှတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းတိမ်းဖိုတခုတော့ရှိရဲ့ ။ ဒီတုံးက မောင်ကြည်ရှင်က ဆူးလေကုန်းရပ်ထဲက ဦးမောင်မောင်အလွတ်ပညာသင်ကျောင်း (နေရှင်နယ်ကျောင်းလို့ လဲ ခေါ်တယ်ထင်ရဲ့ ) မှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား တက္ကသိုလ်ဝင်သင်တန်းတက်နေနှင့်ပြီ။ အခု အငြိမ်းစား
သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး ဟောင်း ( မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက်အငယ်ဆုံးအထက်တန်းကျောင်းအုပ် လို့ လဲ နာမည်ကြီးရဲ့ ။ )စာရေးဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်စိုးတင့်ရဲ့ဘခင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ အငယ်၂ယောက်ကတော့ Wesley School လို့ခေါ်တဲ့ ခရစ်ယန်သာသနာပြုကျောင်းမှာ
နေခွင့်ရတယ်။ပြောရအုံးမယ် .။ဒီဇင်္ဘာလ ခရစ်စမတ်ပွဲနေ့ တွေဆို ကျမသိပ်ပျော်တာပဲ။ ပွဲတော်နေ့သွားတဲ့ စတိုင်ကို ကြည့်မလား။ သိုးမွှေးခေါင်းစွပ်ကြီးဆောင်းတယ်။လက်အိပ်ခြေအိပ်စွပ်တယ်။Long coat ခေါ်တဲ့အင်္ကျီပွပွရှည်ရှည် ၀တ်တယ်။ Canvas ခေါ်တဲ့ဖိနပ်စီးပီး ရွှေခြေကျင်းထပ်ဝတ်တယ်။ မိုက်တယ်နော်။ စာဖတ်သူပုံဖေါ်မိရင်ရယ်နေမလားပဲ ။ ပွဲက ညပွဲဆိုတော့ မုံရွာမှာက အရမ်းချမ်းတယ်လေ။( ဒီပုံစံက အဖေနဲ့ ကျမ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်တွေ့ ရနိုင်တဲ့ပုံစံပါပဲ။ ခြေကျင်းကြီးတော့မပါဘူးပေါ့။ ) ကျမက Church လဲ တက်တယ် ။ဓမ္မသီချင်းတွေကိုလဲ ကြိုက်တယ် ။ (စာသားကိုတော့မကြိုက်ဖူး။ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့နားမရှင်းလို့ ။ )
ဖေဖေ့ညီမ၀မ်းကွဲက ခရီယာန်ဆိုတော့ သူက ကျမကိုအမြဲ ခေါ်သွားလေ့ရှိတယ်။ မနက်တိုင်းလဲ ၄၅မိနစ် ကျမ်းစာသင်ရတယ်။ ဓမ္မသီချင်းတွေဆိုရတယ်။ သီချင်းတွေက အသံသာလို့ကျမကသိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျမက အဲဒီအရွယ်ကတည်းက ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကို လက်မခံနိုင်ခဲ့ ပါဘူး။
အဖေကလေ ကျမကို ဘယ်လောက်ချစ်သလဲ ဆိုရင် ကျမ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထိ ဆံပင်ကိုဆီလူးပေးတုံး ၊ ဆံထုံးထုံးပေးတုံး။ ခြေသည်းလက်သည်းလှီးပေးတုံး။
ဒါပေမဲ့ကျမအရွယ်ကလေးရလာတော့ အဖေနဲ့ ရော အကိုတွေနဲ့ ပါ ဘ၀ခြားသွားသလိုပဲ။ ဆက်ဆံရေးက ပြောင်းလွဲသွားတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်လဲ အဖေ့ကို “ ဖေ..ဖေ့ “ လို
ချွဲဘို့ရှက်ရွံ့ လာတယ်။့Wesley မှာ ၃နှစ်ပဲ နေလိုက်ရတယ် ။အဖေက ကျမကိုကျောင်းနှုတ်ပါလေရော။ မိန်းခလေးမို့ တော်ပြီးတဲ့ ။အိမ်မှာပဲ နေရပြီး ရွှေဆိုင်ထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ရွှေချိ်ိန်တွယ်တာ။အရည်အသွေးစစ်တာ ဘာညာပြပေးတယ်။ ပြီးတော့ ဖေဖေတို့ က ချည်ထုတ်တွေလဲ ရောင်းတာဆိုတော့ ..
ဖေဖေတို့ ရေချိုးထမင်းစားနေရင် ကျမက ဆိုင်ထိုင်ရတယ်။ (ဆိုင်စောင့်ရတာပါ။ )
တနေ့တော့ ..မိန်းမ၃ ယောက်ဝင်ချလာတယ်။ ချည်ထုတ်တွေဈေးမေးလို့ ရောင်းရတော့မယ်လို့ ပျော်ပြီး ကျမက ဖေဖေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြောရတယ်။ တယောက်က “ ရေဆာလိုက်တာသမီးရယ် ..
ရေတခွက်လောက်တိုက်ပါအုံး “တဲ့ ။ ရေယူပြီးထွက်လာတော့ တယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။ ချည်ထုတ်လဲ ၃ထုတ်ပျောက်သွားတယ်။ အဖေက မဆူပါဘူး။ “ငါ့ သမီး မှတ်ထား။
လူတွေ အားလုံး ကိုယ်လို မဟုတ်ဘူး “တဲ့ ။ “ အဲဒါ သမီးအတွက် ပွဲဦးထွက် သင်ခန်းစာပဲ “ လို့ ပြောတယ်။ “ပြုသူအသစ် ခံရသူ အဟောင်း “ လို့ လဲ ဖေဖေကပြောပါတယ်။ ကျောင်းထွက်ပြီး ၂နှစ်လောက်ကြာမှ ကျမ မျက်စိပွင့်လာတယ်ပြောရမှာပါ။ ဘန်ကောက်လုံချည်တရွှမ်းရွှမ်းနဲ့လေယာဉ်ကြီးနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းတက်သွားတဲ့အကိုတွေကို မနာလိုတော့ဘူး။ Wesley တုံးက ကျမသူငယ်ချင်းတွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးဖြစ်ကုန်တာကျ မ မနာလိုတော့ဘူး။ ကျမကိုယ်ကျမ သိမ်ငယ်သွားတယ်။ဘာ့ကြောင့် ကျမ ကျောင်းတက်ခွင့် မရ ရမှာလဲ ။ အဖေ့ကို တိုက်ရိုက်ကျမ အရေးဆိုတယ်။ အဖေက စာနာတတ်သား။ ချက်ခြင်းပဲ ကျောင်းအပ်ပေးတယ်။ဗုဒ္မဘာသာကျောင်း လို့ ခေါ်တဲ့(အမှတ် ၁ )အထက်တန်းကျောင်းမှာကျမနေခွင့်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ဖေဖေက စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ခွင့်ပြုတာပါ။ စာကလွဲရင် ဘာမှ အပိုမလုပ်ပါဘူး။ ကျေင်းနဲ့ အိမ်၊ အိမ်နဲ့ ကျောင်းကလွဲလို့ဘယ်မှ မသွားပါဘူး။ ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းမထားပါဘူး လို့ကျမက ၀န်ခံ ထားရတယ်လေ။ လွယ်လွယ်ဝန်ခံခဲ့ ပေမဲ့လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဘို့ခက်ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသားကြီးဖြစ်လာတော့ နဲနဲ လူမှုရေး များလာပါပြီ။ ကျမက လဲကျမ အပိုတွေလုပ်ချင်ခဲ့ တယ်လေ။
ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်ဦးစီးတဲ့ငှက်ပြာမယ် (Girl Guide ) လဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့ တယ်။ လေထဲမှာ ဟိုသည်ပျံဝဲနေတဲ့ကြက်တောင်ဖြူဖြူလေးကိုလဲ လိုရာထိန်းချုပ် ဖမ်းယူပို့ ပြစ်ဘို့ဝန်မလေးခဲ့ ဘူး။ “တိုးတက်သော အတွေးအခေါ်ရှိသူ ကျောင်းသား “ အုပ်စုဝင်လဲ ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ DSO တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အလံကိုင် ချီတက်ခဲ့ ဖူးတယ်။ ဖေဖေတို့အမြင် မှာတော့ ကျမက “ ပါလေရာ “ ပေါ့။ မိန်းခလေးတန်မဲ့နေရာတကာ ပါလေရာ ဘွဲ့ နဲ့သဘောထားကွဲလွဲခဲ့ ကြတယ်။ ကျမက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် သမိုင်းတွေ ပထ၀ီတွေထဲ က စကားအဆန်းတွေပြောတတ်လာတယ်။မိဘတွေကို Autocracy ဆန်တယ်ဆိုတာမျိုးဝေဖန်တတ်လာတယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီးဟာ ကျေးကျွန်နဲ့သခင် အနေအထားမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာတို့ပြောတတ်လာတယ်။ လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး။ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတို့ပြောတတ်လာတယ်။ မိန်းကလေးမို့အစိုးရိမ်ပိုရှာတယ်လို့အဖေ့ကို စာနာကြည့်ဖို ကျတော့ ကျမ ပျက်ကွက်ခဲ့ တယ်။့ 
လပိုင်းလောက်သာလိုတော့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုတောင် လက်လွတ်ခံပြီး ဖေဖေ့ကို အရွဲ့ တိုက် စွန့် ခွာပစ်ထားလို့ အိမ်နဲ့ ဝေးရာ မိုင်ပေါင်းများစွာ ပြေးထွက်မိတော့တယ်။ခုတော့ကျမသိပြီ။ ကျမစာနာတတ်ပါပြီ။ ဒီ့အတွက် ဖေဖေ့ကို ကျမ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အဖေ့ရှေ့ မှာ ဒူးထောက်ပြီး “ကျမမှားခဲ့ ပါတယ် အဖေ ရယ်” လို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဖေက ကျမကို မပြောမဆို နှုတ်လဲ မဆက် စွန့်ခွာထားရစ်ခဲ့တာကြာပြီကော။ နောင်သံသရာမှာ ဖေဖေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ ခွင့်ရရင် ကျမ ဒေါက်တာကျော်စိန်ရေးတဲ့အောက်ပါစာပိုဒ် လေးကို ဖတ်ပြမိမှာ အသေအချာပါပဲ။ ။
“အချို့သည် မိဘအိမ်တွင် နေရသည်ကို စိတ်ညစ်၍၄င်း ၊ ကျောင်းစာသင်ရသည်ကို ငြီးငွေ့ ၍၄င်း ၊
မိသားစုရင်ခွင်၌ မပျော်ရွှင်၍ ၄င်း၊ ယင်းတို့ မှ လွတ်မြောက်ရန် အလို့ ငှာ ၊ မည်သူ့ ကိုဖြစ်ဖြစ်
လက်ထပ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခြင်းပြုတတ်၏။ ကျားကြောက်၍ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုးဟူသကဲ့ သို့ 
ဘ၀အခက်အခဲများမှ အလွတ်ရုန်းလို၍ အိမ်ထောင်ပြုသူများသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသော
အိမ်ထောင်ရေးပြသနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ရကာ စိတ်ပျက်ခြင်း ၊ ပူပန်သောကရောက်ခြင်းတို့ ဖြင့် သာ စခန်းသိမ်းရလေ့ရှိသည်။”
ဒေါက်တာကျော်စိန် MA.PhD (Columbia)
စိတ်ပညာဋ္ဌာနမှူး ရန်ကုန် ၀ိဇ္မာ သိပ္မံတက္ကသိုလ်။
12:08 PM အက်ဆေး No comments
2:15 PM ဘင်လာဒင်မရှိတော့တဲ့ ကမ္ဘာထဲမှာ, ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး 8 comments